သံဃာတော်တွေကို ပြစ်မှားလို့ လက်ရှိဘ၀မှာပင် ခံစားရတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပါ။ ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ
မြတ်ဗုဒ္ဓသည်သည်လည်း အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်က မစင်ကြယ်သော်လည်း အလှူပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘက်က စင်ကြယ် လျှင် အကျိုးကြီးသည်ဟု ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤသို့မဟုတ်ဘဲ မိမိမြင်ဖူးကြားဖူး တွေ့ဖူးသည့် ရဟန်းတစ်ချို့ကို ကြည့်၍ ရဟန်းအားလုံးအတူတူပဲဟု သတ်မှတ်ပြီး ပြစ်မှားမိပါက ရန်မီးလောင်ခံရသည့် အကြောင်းကို အောက်ပါဖြစ်ရပ် မှန်ဇာတ်လမ်းအားထပ်မံ၍ တင်ပြပါဦးမည်။
“ နှုတ်မစောင့်သော မိန်းမချော”
ရုံးဆင်းချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် လိုင်းကားပေါ်တွင် ခရီးသည်များ ပြည့်ကျပ်နေသည်။ ကားပေါ်တွင် သက်တော်သုံး ဆယ်ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိသေးသည့် ရဟန်းတစ်ပါးလည်းလိုက်ပါလာသည်။ ကားအရှေ့ပိုင်းရှိ “သံဃာတော်များကို ဦးစားပေးပါ”ထိုင်ခုံတွင်လည်း ဦးထားသည့်သူကရှိနေသည်။
ထို့အပြင်ထိုနေရာသို့ရောက်အောင်သွားဖို့က ပြည့်ကျပ်နေသည့်လူတွေထဲ တိုးဝှေ့၍သွားရမည် ဖြစ်သည့် အတွက် မလွယ်ကူလှပေ။ ပြီးတော့မကြာမီ ဆင်းရမည့်မှတ်တိုင်သို့ရောက်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် အလယ်လောက်မှာ ပင် အပေါ်တန်းကိုကိုင်၍ လိုက်ပါလာခဲ့သည်။
လိုင်းကားကထုံးစံအတိုင်း နောက်ကားကျော်မတက်အောင် အပြင်းမောင်းနေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘရိတ် တစ်ချက် ဆောင့်အနင်းတွင် အပေါ်တန်းကိုကိုင်ထားသည့်ကြားထဲက ရဟန်းတော်၏ ခန္ဓာကိုယ်က ရှေ့သို့ယိုင်ကာ ပါသွားပြန်သည်။ ပြဿနာက ဤနေရာမှအစပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ရဟန်းတော်နှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင် အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်ခန့် မိန်းမချောလေး တစ်ဦးရှိသည်။ ကားဘရိတ်တစ်ချက်ဆောင့်အနင်းတွင်း အနှီမိန်းမချောနှင့်မတော်တဆ ထိခိုက်မိသွားလေတော့သည်။ ဤတွင် မိန်းမချော ကအတွေးတစ်မျိုးပေါက်သွားပုံရသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ရဟန်းနှင့်မသင့်တော် မလျောက်ပတ်သည့်လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ်နေသည့် ရဟန်းတစ်ပါးတစ်လေကို တွေ့ဖူး ကြားဖူးဟန်တူသည်။
ထိုအသိအမြင်ကိုပင် အမှန်ဟုယူဆထားဟန်တူသည့် မိန်းမချောသည် ရဟန်းတော်ကို ကက်ကက်လန်အောင် ရန်တွေ့တော့သည်။ ရဟန်းတော်က အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြသည်။ မိန်းမချောက လက်မခံ။ ဆက်၍ ရန်တွေ့နေသည်။ မကြာမီ မှတ်တိုင်သို့ရောက်လာသည့်အတွက် ရဟန်းတော်လည်း ရှက်ရှက်နှင်ပင် ကားပေါ်ကဆင်းသွားတော့သည်။
မိန်းမချောကမူ လိုင်းကားနှင့် ဆက်၍လိုက်ပါသွားသည်။ထိုမိန်းမချောလည်း ဆင်းရမည့်မှတ်တိုင်သို့ရောက်သည်နှင့် ဆင်းသွားပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလျှောက်နေ သည်။ဤတွင် မပြစ်မှားသင့် မပြစ်မှားထိုက်သည့် ရဟန်းကို ပြစ်မှားမိသည့် မိန်းမချောကို အကုသိုလ်ကံကြမ္မာက မညှာမတာပင် ဒဏ်ခတ်လိုက်လေတော့သည်။
ဖြစ်ပုံကား ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လျှောက်သွားနေသည့် နှုတ်မစောင့်သော မိန်းမချောကို ယဉ်ကြောအတိုင်း မောင်းလာသည့် ကားတစ်စီးက မည်သို့ဖြစ်မှန်းမသိ မခန့်မှန်းနိုင်မီမှာပင် ဝင်တိုက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိန်းမချော ကားနေရာမှာပင် ပွဲချင်းပြီး ကိစ္စချောသွားလေပြီတည်း။ မပြစ်မှားသင့် မပြစ်မှားထိုက်သည့် ရဟန်းသံဃာတော်အား နှုတ်ဖြင့် လွန်လွန်ကျူးကျူး စော်ကားခဲ့သည့်အတွက် တန်ပြန်သက်ရောက်မှုဆိုးကျိုးကို ချက်ခြင်းခံစားခဲ့ရခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
အမဲလိုက်ခွေးများနှင့်အတူ တောထဲသို့ အမဲလိုက်ရန် မုဆိုးကြီးကောက ထွက်လာသည်။ လမ်းခရီးတွင် ရွာထဲသို့ ဆွမ်းခံကြွတော်မူလာသည့် ရဟန်းတစ်ပါးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ဆုံမိသည်။ ဤတွင် ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ရဟန်း တော်ကို ဖူးတွေ့ရသော်လည်း စိတ်ထားမကောင်းသည့် ကောက တစ်ယောက်ကား အကုသိုလ်ကို ဈေးပေါပေါနှင့် ဝယ်ယူ လိုက်လေတော့သည်။
“တောက်- ဒီနေ့ကျခါမှ ဒီသူယုတ်တွေကို တွေ့နေရတယ်၊ မင်္ဂလာမရှိလိုက်တာ၊ ဒီနေ့တော့ သားကောင် တစ်ကောင်မှ ရမယ်မထင်ဘူး “
ကောက၏ ဒေါသတကြီးပြောဆိုလိုက်သည့် စကားများသာ။ ဤသို့ဖြင့် တောထဲသို့ရောက်လာပြီး သားကောင် ရှာဖွေပါသော်လည်း အချိန်သာ ကုန်သွားသည်။ သားကောင်တစ်ကောင်မှ မရသေးပေ။ ထိုအခါ လမ်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် ရဟန်းတော်အပေါ် ဒေါသပိုပြီးထွက်လာသည်။
ဒေါသကို ရင်မှာပိုက်ပြီး ရွာသို့ပြန်လာခဲ့ရာ ကောကတစ်ယောက် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ရွာထဲမှ ဆွမ်းခံပြန်ကြွ လာသည့် ရဟန်းတော်နှင့် ဆုံမိပြန်လေသည်။ သည်အခါ ဒေါသအပေါ်ဒေါသဆင့်လာသည့်အတွက် အမဲလိုက်ခွေးများကို ရှုးတိုင်၍ ရဟန်းတော်ကို ကိုက်သတ်ရန် စေခိုင်းလိုက်တော့သည်။
ရဟန်းတော်လေးသည်လည်းအသက်ဘေးကြောင့်ထန့်လန့်ကာထွက်ပြေးရှာသည်။မလွတ်သည့်အဆုံးတွင်နီးစပ်ရာသစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်လျှင်မြန်စွာ ပြေးတက်သွားသည်။ ကောက၏ ဒေါသကအရှိန်ကောင်းနေဆဲ။ ထို့ကြောင့် သစ်ပင်အောက်မှနေ၍ မြှားဆူးချွန်တို့ဖြင့် ရဟန်းတော်လေး၏ ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်အား အကြိမ်များစွာ ထိုးလိုက်သည်။
ရဟန်းတော်လေးသည်လည်း အသည်းခိုက်မတတ် နာကျင်လှသည့်အတွက် ကိုယ်ရုံသင်္ကန်းကိုမျှ ထိန်းသိမ်းနိုင် စွမ်းမရှိတော့ဘဲ အောက်သို့ကျွတ်ကျသွားလေတော့သည်။ သင်္ကန်းသည်အဝေးသို့မလွင့်သွားဘဲ ရဟန်းတော်ခြေဖဝါးကို မြှားဖြင့်ထိုးဆွနေသည့် ကောကမုဆိုး၏ခေါင်းပေါ်သို့ လွှမ်းခြုံလျက်သား ကျသွားလေပြီတည်း။
ဤတွင် သစ်ပင်ပေါ်မှ ရဟန်းတော်လေအား ဒေါသတကြီး မာဖီဟိန်းဟောက်နေကြသည့် ခွေးကြီးများသည် သခင် ဖြစ်သူ ကောကမုဆိုးအား သစ်ပင်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျလာသည့် ရဟန်းဟုထင်မှတ်ပြီး ဝိုင်းဝန်းကိုက်ခဲကြလေတော့သည်။ အကုသိုလ်အကျိုးပေးကား မြန်ဆန်လွန်းလှသည်။
ကောကမုဆိုးတစ်ယောက် သူ့အမဲလိုက်ခွေးကိုက်ခဲရကာ အသေဆိုး နှင့်သေခဲ့ရရှာလေပြီ။ သေသည်နှင့်တပြိုင်နက် ရဟန်းသံဃာအပေါ် ကံသုံးပါးတို့ဖြင့် ပြစ်မှားမိခဲ့သည့်အတွက် အဝီစိငရဲ သို့ကျသွားရှာလေတော့သတည်း။
သာဝတ္ထိရွှေမြို့တော်တစ်နေရာရှိ ရွဲသမား၏နေအိမ်ထဲတွင်ဖြစ်သည်။ ဆွမ်းခံထွက်ချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် သူကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လှူဒါန်းနေသည့် တိဿမထေရ်မြတ်သည်လည်း အိမ်သို့ကြွတော်မူလာခိုက်တွင်ပဲဖြစ်သည်။ ထို အချိန်တွင် ရွဲသမာားက မထေရ်မြတ်ရှေ့မှာပင် ဟင်းလျာအသားကို လှီးနေသည်။
သည်အခိုက်မှာပင် ကောသလမင်းကြီး ပို့ဆက်လာသည့် ပတ္တမြားတစ်လုံးက ရောက်ရှိလာသည်။ ပတ္တမြားကို သွေး၍ အပေါက်ဖောက်ပေးရမည့်တာဝန်က သူ့တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ ရွဲသမားလည်း သွေးလူးနေသည့်လက်နှင့် ပတ္တမြား ကိုကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး စဉ်းတီးတုံးပေါ်တွင် တင်ထားလိုက်သည်။
ဖြစ်ချင်တော့ အိမ်တွင်မွေးထားသည့် ကြိုးကြာငှက်သည် သွေးလူးနေသည့် ပတ္တမြားကို ဟင်းလျာသားဟုထင်ကာ မထေရ်မြတ်ရှေ့မှာပင် ကောက်မျိုချလိုက်လေသည်။ ရွဲသမားသည် အိမ်ထဲမှထွက်လာပြီး ပတ္တမြားကို မတွေ့သည့်အခါ တွင်ကား-
“ပတ္တမြားကို ဘယ်သူယူသွားသလဲဟေ့”ဟု အိမ်သူ အိမ်သားတို့ကို မေးမြန်းလိုက်သည်။ အိမ်သူအိမ်သားများက မယူဟု ဆိုသည့်အခါ ဆရာသခင် မထေရ်မြတ်အပေါ် ရွဲသမား အထင်လွဲလာတော့သည်။ ထိုကြောင့်
“အရှင်ဘုရား ပတ္တမြား ယူထားတာလား”
ဤတွင် ဇနီးဖြစ်သူက ဝင်ရောက်ပြောဆိုလာသည်။ “ယောက်ကျား ဒီလိုမပြောပါနဲ့ ၊အရှင်မြတ်ကတော့ ယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး”
မယားကသာ ပြောသော်လည်း အနားတွင် မထေရ်မြတ်သာရှိသည့်အတွက် အမြင်က မကြည်လင်နိုင်ရှာပေ။
”စဉ်းတီတုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ ပတ္တမြားကို အရှင်ဘုရား ယူထားလား”
”ရဟန်း မယူဘူး၊ ဒကာတော်”
” ဒီနားမှာ အရှင်ဘုရားကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ အရှင်ဘုရားမယူရင် ဘယ်သူယူမှာလဲ၊ ယူထားတဲ့ ပတ္တမြားကို ပြန်ပေးပါ ဘုရား”
မထေရ်မြတ်က ဝန်မခံသည့်အခါ ရွဲသမားသည် မယားကိုကြည့်ပြိး သူ့အထင်ကိုပြောဆိုလိုက်ပြန်သည်။
” မိန်းမရေ .. ငါ့တော့အရှင်ဘုရား ယူထားတယ်လို့ပဲထင်တယ်၊ ပတ္တမြားပြန်ရအောင် နှိပ်စက်မေးမှဖြစ်တော့ မယ်”
” အိုယောက်ကျားရယ်၊ ကျွန်မတို့ ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်ပါနဲ့၊ ကျွန်မတိုကအားလုံး ကျွန်ဘဝ ရောက်ချင် ရောက်ပါစေ ၊ အရှင်မြတ်ကိုတော့ မနှိက်စက်ပါနဲ့ ရှင်ရယ်”
” တော်-တော် ရှင်မ၊ ငါတို့တစ်အိမ်သားလုံးရောင်းတောင်မှ ပတ္တမြားဖိုးရမှာမဟုတ်ဘူး၊ဘာမှလာပြောမနေနဲ့၊ ရဟန်းကိုနှိပ်စက်ပြီး စစ်ဆေးရမယ်”
ရွဲသမားသည် ဤသို့ပြောဆိုပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းပြီး ကြိုးဖြင့် မထေရ်မြတ်၏ ဦးခေါင်းကို ရစ်ပတ်ချည်နှောင်ကာ တုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်လေတော့သည်။ မထေရ်မြတ်၏ ခေါင်း၊နှာခေါင်းနား တို့မှ သွေးများထွက်လာကြ သည်။မျက်စိအစုံသည် ပေါက်ထွက်မတတ် နာကျင်စွာ ဝေဒနာကိုခံစားလျက်ကပင် ပစ်လဲကျသွားရှာသည်။
ဤတွင် မွေးထားသော ကြိုးကြာငှက်သည် သွေးနံ့ရသောကြောင့် ပြေးလာကာ သွေးကိုသောက်သည်။ ရွဲသမားသည် ဒေါသဖြစ်ြဖစ်နှင့် ကြိုးကြာကို ခြေထောက်နှင့် ဆောင့်ကန်လိုက်ရာ ကြိုးကြာငှက်လည်း တစ်ချက်တည်းနှင့် သေသွားတော့သည်။ ကြိုးကြာငှက်သေသွားသည်ကို မြင်သည့် အခါကျမှ မထေရ်မြတ်သည်-
”ဒကာတော်၏ ပတ္တမြားကို ရဟန်းယူခြင်း မဟုတ်၊ကြိုးကြာကောင်မျိုထားခြင်းသာဖြစ်တယ်၊ တကယ်လို့ ကြိုးကြာငှက်သာ မသေဘူးဆိုရင် ရဟန်းသေသွားတောင် ဒကာတော် အနေနဲ့ ပတ္တမြားကို ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူး”
ကြိုးကြာငှက်၏ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှ ပတ္တမြားကို ပြန်ရခဲ့လေပြီ။ သည်အခါကျမှ ရွဲသမားသည် အမှားကြီး မှားခဲ့ပြီမှန်း သိရှိသွားပြီး နောင်တများနှင့်အတူ မထေရ်မြတ်ကို တောင်းပန်ရှာသည်။
”တကာတော် သင့်တွင်အပြစ်မရှိ၊အတိတ်ဝဋ်ကြွေးကြောင့်သာလျှင် ရဟန်းယခုလို ခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်၊ သင့် အပြစ်ကို ရဟန်းသည်းခံပါတယ်”
မထေရ်မြတ်သည် ငရဲသွားမည့်ရွဲသမားနှိပ်စက်သည့် ဒဏ်ရာကြောင့်ပင် မကြာမီ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရရှာသည်။ ကြိုးကြာငှက်သည် ရွဲသမား၏ မယားဖြစ်သူ၏ ဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓေယူသည်။ရွဲသမား၏ မယားသည် စိတ်ထားနူးညံ့သည့် အတွက် သေသည့်အခါ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ရသော်လည်း ရဟန္တာကို ပြစ်မှားခဲ့သည့် ရွဲသမားသည်ကား သေသည့်အခါ ငရဲသို့ လားခဲ့ရရှာလေတော့သည် ။
By – စိတြရံသီ
အညွှန်း- ရဟန်းမစားသော ဆွမ်းတနပ်
ဦးဇင်းကို ရဟန်းတွေ အတွက်လည်း ရေးပါအုံးလို့ ပြောပါတယ်။ ရဟန်းဘက်ကတော့ သူကံတရား သူစီရင်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိဒကာ၊ ဒကာမတွေ ကိုယ့်ဘက်စိတ်ထားတတ်အောင် တင်ပြရခြင်းပါ။ လိုက်နာခြင်း၊ မလိုက်နာခြင်းကတော့ အခြားသူရဲ့ ကဏ္ဍပဲလို့ မှတ်ပါတယ်။
အားလုံး ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
သံဃာတျောတှကေို ပွဈမှားလို့ လကျရှိဘဝမှာပငျ ခံစားရတဲ့အကုသိုလျတရားတှပေါ။ ကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ။ ဖတျကွညျ့ပါ
မွတျဗုဒ်ဓသညျသညျလညျး အလှူခံပုဂ်ဂိုလျဘကျက မစငျကွယျသျောလညျး အလှူပေးပုဂ်ဂိုလျဘကျက စငျကွယျ လြှငျ အကြိုးကွီးသညျဟု ဟောကွားတျောမူခဲ့ပါသညျ။ ဤသို့မဟုတျဘဲ မိမိမွငျဖူးကွားဖူး တှဖေူ့းသညျ့ ရဟနျးတဈခြို့ကို ကွညျ့၍ ရဟနျးအားလုံးအတူတူပဲဟု သတျမှတျပွီး ပွဈမှားမိပါက ရနျမီးလောငျခံရသညျ့ အကွောငျးကို အောကျပါဖွဈရပျ မှနျဇာတျလမျးအားထပျမံ၍ တငျပွပါဦးမညျ။
“ နှုတျမစောငျ့သော မိနျးမခြော”
ရုံးဆငျးခြိနျဖွဈသညျ့အတှကျ လိုငျးကားပျေါတှငျ ခရီးသညျမြား ပွညျ့ကပျြနသေညျ။ ကားပျေါတှငျ သကျတျောသုံး ဆယျဝနျးကငျြခနျ့သာရှိသေးသညျ့ ရဟနျးတဈပါးလညျးလိုကျပါလာသညျ။ ကားအရှပေို့ငျးရှိ “သံဃာတျောမြားကို ဦးစားပေးပါ”ထိုငျခုံတှငျလညျး ဦးထားသညျ့သူကရှိနသေညျ။
ထို့အပွငျထိုနရောသို့ရောကျအောငျသှားဖို့က ပွညျ့ကပျြနသေညျ့လူတှထေဲ တိုးဝှေ့၍သှားရမညျ ဖွဈသညျ့ အတှကျ မလှယျကူလှပေ။ ပွီးတော့မကွာမီ ဆငျးရမညျ့မှတျတိုငျသို့ရောကျတော့မညျဖွဈသောကွောငျ့ အလယျလောကျမှာ ပငျ အပျေါတနျးကိုကိုငျ၍ လိုကျပါလာခဲ့သညျ။
လိုငျးကားကထုံးစံအတိုငျး နောကျကားကြျောမတကျအောငျ အပွငျးမောငျးနသေညျ။ တဈခါတဈရံ ဘရိတျ တဈခကျြ ဆောငျ့အနငျးတှငျ အပျေါတနျးကိုကိုငျထားသညျ့ကွားထဲက ရဟနျးတျော၏ ခန်ဓာကိုယျက ရှသေို့ယိုငျကာ ပါသှားပွနျသညျ။ ပွဿနာက ဤနရောမှအစပွုခွငျးဖွဈသညျ။
ရဟနျးတျောနှငျ့အနီးဆုံးနရောတှငျ အသကျနှဈဆယျကြျောသုံးဆယျဝနျးကငျြခနျ့ မိနျးမခြောလေး တဈဦးရှိသညျ။ ကားဘရိတျတဈခကျြဆောငျ့အနငျးတှငျး အနှီမိနျးမခြောနှငျ့မတျောတဆ ထိခိုကျမိသှားလတေော့သညျ။ ဤတှငျ မိနျးမခြော ကအတှေးတဈမြိုးပေါကျသှားပုံရသညျ။ သို့တညျးမဟုတျ ရဟနျးနှငျ့မသငျ့တျော မလြောကျပတျသညျ့လုပျရပျမြားကို ပွုလုပျနသေညျ့ ရဟနျးတဈပါးတဈလကေို တှဖေူ့း ကွားဖူးဟနျတူသညျ။
ထိုအသိအမွငျကိုပငျ အမှနျဟုယူဆထားဟနျတူသညျ့ မိနျးမခြောသညျ ရဟနျးတျောကို ကကျကကျလနျအောငျ ရနျတှတေ့ော့သညျ။ ရဟနျးတျောက အကြိုးအကွောငျးရှငျးပွသညျ။ မိနျးမခြောက လကျမခံ။ ဆကျ၍ ရနျတှနေ့သေညျ။ မကွာမီ မှတျတိုငျသို့ရောကျလာသညျ့အတှကျ ရဟနျးတျောလညျး ရှကျရှကျနှငျပငျ ကားပျေါကဆငျးသှားတော့သညျ။
မိနျးမခြောကမူ လိုငျးကားနှငျ့ ဆကျ၍လိုကျပါသှားသညျ။ထိုမိနျးမခြောလညျး ဆငျးရမညျ့မှတျတိုငျသို့ရောကျသညျနှငျ့ ဆငျးသှားပွီး ပလကျဖောငျးပျေါမှာလြှောကျနေ သညျ။ဤတှငျ မပွဈမှားသငျ့ မပွဈမှားထိုကျသညျ့ ရဟနျးကို ပွဈမှားမိသညျ့ မိနျးမခြောကို အကုသိုလျကံကွမ်မာက မညှာမတာပငျ ဒဏျခတျလိုကျလတေော့သညျ။
ဖွဈပုံကား ပလကျဖောငျးပျေါတှငျလြှောကျသှားနသေညျ့ နှုတျမစောငျ့သော မိနျးမခြောကို ယဉျကွောအတိုငျး မောငျးလာသညျ့ ကားတဈစီးက မညျသို့ဖွဈမှနျးမသိ မခနျ့မှနျးနိုငျမီမှာပငျ ဝငျတိုကျလိုကျခွငျးပငျဖွဈပါသညျ။ မိနျးမခြော ကားနရောမှာပငျ ပှဲခငျြးပွီး ကိစ်စခြောသှားလပွေီတညျး။ မပွဈမှားသငျ့ မပွဈမှားထိုကျသညျ့ ရဟနျးသံဃာတျောအား နှုတျဖွငျ့ လှနျလှနျကြူးကြူး စျောကားခဲ့သညျ့အတှကျ တနျပွနျသကျရောကျမှုဆိုးကြိုးကို ခကျြခွငျးခံစားခဲ့ရခွငျး ပငျဖွဈသညျ။
အမဲလိုကျခှေးမြားနှငျ့အတူ တောထဲသို့ အမဲလိုကျရနျ မုဆိုးကွီးကောက ထှကျလာသညျ။ လမျးခရီးတှငျ ရှာထဲသို့ ဆှမျးခံကွှတျောမူလာသညျ့ ရဟနျးတဈပါးနှငျ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျ တှဆေုံ့မိသညျ။ ဤတှငျ ကွညျညိုဖှယျရာ ရဟနျး တျောကို ဖူးတှရေ့သျောလညျး စိတျထားမကောငျးသညျ့ ကောက တဈယောကျကား အကုသိုလျကို စြေးပေါပေါနှငျ့ ဝယျယူ လိုကျလတေော့သညျ။
“တောကျ- ဒီနကေ့ခြါမှ ဒီသူယုတျတှကေို တှနေ့ရေတယျ၊ မင်ျဂလာမရှိလိုကျတာ၊ ဒီနတေ့ော့ သားကောငျ တဈကောငျမှ ရမယျမထငျဘူး “
ကောက၏ ဒေါသတကွီးပွောဆိုလိုကျသညျ့ စကားမြားသာ။ ဤသို့ဖွငျ့ တောထဲသို့ရောကျလာပွီး သားကောငျ ရှာဖှပေါသျောလညျး အခြိနျသာ ကုနျသှားသညျ။ သားကောငျတဈကောငျမှ မရသေးပေ။ ထိုအခါ လမျးမှာတှမွေ့ငျခဲ့ရသညျ့ ရဟနျးတျောအပျေါ ဒေါသပိုပွီးထှကျလာသညျ။
ဒေါသကို ရငျမှာပိုကျပွီး ရှာသို့ပွနျလာခဲ့ရာ ကောကတဈယောကျ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပငျ ရှာထဲမှ ဆှမျးခံပွနျကွှ လာသညျ့ ရဟနျးတျောနှငျ့ ဆုံမိပွနျလသေညျ။ သညျအခါ ဒေါသအပျေါဒေါသဆငျ့လာသညျ့အတှကျ အမဲလိုကျခှေးမြားကို ရှုးတိုငျ၍ ရဟနျးတျောကို ကိုကျသတျရနျ စခေိုငျးလိုကျတော့သညျ။
ရဟနျးတျောလေးသညျလညျးအသကျဘေးကွောငျ့ထနျ့လနျ့ကာထှကျပွေးရှာသညျ။မလှတျသညျ့အဆုံးတှငျနီးစပျရာသဈပငျတဈပငျပျေါလြှငျမွနျစှာ ပွေးတကျသှားသညျ။ ကောက၏ ဒေါသကအရှိနျကောငျးနဆေဲ။ ထို့ကွောငျ့ သဈပငျအောကျမှနေ၍ မွှားဆူးခြှနျတို့ဖွငျ့ ရဟနျးတျောလေး၏ ခွဖေဝါးနှဈဖကျအား အကွိမျမြားစှာ ထိုးလိုကျသညျ။
ရဟနျးတျောလေးသညျလညျး အသညျးခိုကျမတတျ နာကငျြလှသညျ့အတှကျ ကိုယျရုံသင်ျကနျးကိုမြှ ထိနျးသိမျးနိုငျ စှမျးမရှိတော့ဘဲ အောကျသို့ကြှတျကသြှားလတေော့သညျ။ သင်ျကနျးသညျအဝေးသို့မလှငျ့သှားဘဲ ရဟနျးတျောခွဖေဝါးကို မွှားဖွငျ့ထိုးဆှနသေညျ့ ကောကမုဆိုး၏ခေါငျးပျေါသို့ လှမျးခွုံလကျြသား ကသြှားလပွေီတညျး။
ဤတှငျ သဈပငျပျေါမှ ရဟနျးတျောလအေား ဒေါသတကွီး မာဖီဟိနျးဟောကျနကွေသညျ့ ခှေးကွီးမြားသညျ သခငျ ဖွဈသူ ကောကမုဆိုးအား သဈပငျပျေါမှ ပွုတျကလြာသညျ့ ရဟနျးဟုထငျမှတျပွီး ဝိုငျးဝနျးကိုကျခဲကွလတေော့သညျ။ အကုသိုလျအကြိုးပေးကား မွနျဆနျလှနျးလှသညျ။
ကောကမုဆိုးတဈယောကျ သူ့အမဲလိုကျခှေးကိုကျခဲရကာ အသဆေိုး နှငျ့သခေဲ့ရရှာလပွေီ။ သသေညျနှငျ့တပွိုငျနကျ ရဟနျးသံဃာအပျေါ ကံသုံးပါးတို့ဖွငျ့ ပွဈမှားမိခဲ့သညျ့အတှကျ အဝီစိငရဲ သို့ကသြှားရှာလတေော့သတညျး။
သာဝတ်ထိရှမွေို့တျောတဈနရောရှိ ရှဲသမား၏နအေိမျထဲတှငျဖွဈသညျ။ ဆှမျးခံထှကျခြိနျဖွဈသညျ့အတှကျ သူကိုးကှယျဆညျးကပျလှူဒါနျးနသေညျ့ တိဿမထရျေမွတျသညျလညျး အိမျသို့ကွှတျောမူလာခိုကျတှငျပဲဖွဈသညျ။ ထို အခြိနျတှငျ ရှဲသမာားက မထရျေမွတျရှမှေ့ာပငျ ဟငျးလြာအသားကို လှီးနသေညျ။
သညျအခိုကျမှာပငျ ကောသလမငျးကွီး ပို့ဆကျလာသညျ့ ပတ်တမွားတဈလုံးက ရောကျရှိလာသညျ။ ပတ်တမွားကို သှေး၍ အပေါကျဖောကျပေးရမညျ့တာဝနျက သူ့တာဝနျပငျဖွဈသညျ။ ရှဲသမားလညျး သှေးလူးနသေညျ့လကျနှငျ့ ပတ်တမွား ကိုကောကျကိုငျလိုကျပွီး စဉျးတီးတုံးပျေါတှငျ တငျထားလိုကျသညျ။
ဖွဈခငျြတော့ အိမျတှငျမှေးထားသညျ့ ကွိုးကွာငှကျသညျ သှေးလူးနသေညျ့ ပတ်တမွားကို ဟငျးလြာသားဟုထငျကာ မထရျေမွတျရှမှေ့ာပငျ ကောကျမြိုခလြိုကျလသေညျ။ ရှဲသမားသညျ အိမျထဲမှထှကျလာပွီး ပတ်တမွားကို မတှသေ့ညျ့အခါ တှငျကား-
“ပတ်တမွားကို ဘယျသူယူသှားသလဲဟေ့”ဟု အိမျသူ အိမျသားတို့ကို မေးမွနျးလိုကျသညျ။ အိမျသူအိမျသားမြားက မယူဟု ဆိုသညျ့အခါ ဆရာသခငျ မထရျေမွတျအပျေါ ရှဲသမား အထငျလှဲလာတော့သညျ။ ထိုကွောငျ့
“အရှငျဘုရား ပတ်တမွား ယူထားတာလား”
ဤတှငျ ဇနီးဖွဈသူက ဝငျရောကျပွောဆိုလာသညျ။ “ယောကျကြား ဒီလိုမပွောပါနဲ့ ၊အရှငျမွတျကတော့ ယူမှာ မဟုတျပါဘူး”
မယားကသာ ပွောသျောလညျး အနားတှငျ မထရျေမွတျသာရှိသညျ့အတှကျ အမွငျက မကွညျလငျနိုငျရှာပေ။
”စဉျးတီတုံးပျေါတငျထားတဲ့ ပတ်တမွားကို အရှငျဘုရား ယူထားလား”
”ရဟနျး မယူဘူး၊ ဒကာတျော”
” ဒီနားမှာ အရှငျဘုရားကလှဲလို့ ဘယျသူမှ ရှိတာမဟုတျဘူး၊ အရှငျဘုရားမယူရငျ ဘယျသူယူမှာလဲ၊ ယူထားတဲ့ ပတ်တမွားကို ပွနျပေးပါ ဘုရား”
မထရျေမွတျက ဝနျမခံသညျ့အခါ ရှဲသမားသညျ မယားကိုကွညျ့ပွိး သူ့အထငျကိုပွောဆိုလိုကျပွနျသညျ။
” မိနျးမရေ .. ငါ့တော့အရှငျဘုရား ယူထားတယျလို့ပဲထငျတယျ၊ ပတ်တမွားပွနျရအောငျ နှိပျစကျမေးမှဖွဈတော့ မယျ”
” အိုယောကျကြားရယျ၊ ကြှနျမတို့ ဒုက်ခရောကျအောငျ မလုပျပါနဲ့၊ ကြှနျမတိုကအားလုံး ကြှနျဘဝ ရောကျခငျြ ရောကျပါစေ ၊ အရှငျမွတျကိုတော့ မနှိကျစကျပါနဲ့ ရှငျရယျ”
” တျော-တျော ရှငျမ၊ ငါတို့တဈအိမျသားလုံးရောငျးတောငျမှ ပတ်တမွားဖိုးရမှာမဟုတျဘူး၊ဘာမှလာပွောမနနေဲ့၊ ရဟနျးကိုနှိပျစကျပွီး စဈဆေးရမယျ”
ရှဲသမားသညျ ဤသို့ပွောဆိုပွီးသညျနှငျ့ခကျြခငျြးပွီး ကွိုးဖွငျ့ မထရျေမွတျ၏ ဦးခေါငျးကို ရဈပတျခညျြနှောငျကာ တုတျဖွငျ့ရိုကျနှကျလတေော့သညျ။ မထရျေမွတျ၏ ခေါငျး၊နှာခေါငျးနား တို့မှ သှေးမြားထှကျလာကွ သညျ။မကျြစိအစုံသညျ ပေါကျထှကျမတတျ နာကငျြစှာ ဝဒေနာကိုခံစားလကျြကပငျ ပဈလဲကသြှားရှာသညျ။
ဤတှငျ မှေးထားသော ကွိုးကွာငှကျသညျ သှေးနံ့ရသောကွောငျ့ ပွေးလာကာ သှေးကိုသောကျသညျ။ ရှဲသမားသညျ ဒေါသဖွဈွဖဈနှငျ့ ကွိုးကွာကို ခွထေောကျနှငျ့ ဆောငျ့ကနျလိုကျရာ ကွိုးကွာငှကျလညျး တဈခကျြတညျးနှငျ့ သသှေားတော့သညျ။ ကွိုးကွာငှကျသသှေားသညျကို မွငျသညျ့ အခါကမြှ မထရျေမွတျသညျ-
”ဒကာတျော၏ ပတ်တမွားကို ရဟနျးယူခွငျး မဟုတျ၊ကွိုးကွာကောငျမြိုထားခွငျးသာဖွဈတယျ၊ တကယျလို့ ကွိုးကွာငှကျသာ မသဘေူးဆိုရငျ ရဟနျးသသှေားတောငျ ဒကာတျော အနနေဲ့ ပတ်တမွားကို ပွနျရမှာမဟုတျဘူး”
ကွိုးကွာငှကျ၏ ဝမျးဗိုကျထဲမှ ပတ်တမွားကို ပွနျရခဲ့လပွေီ။ သညျအခါကမြှ ရှဲသမားသညျ အမှားကွီး မှားခဲ့ပွီမှနျး သိရှိသှားပွီး နောငျတမြားနှငျ့အတူ မထရျေမွတျကို တောငျးပနျရှာသညျ။
”တကာတျော သငျ့တှငျအပွဈမရှိ၊အတိတျဝဋျကွှေးကွောငျ့သာလြှငျ ရဟနျးယခုလို ခံစားရခွငျးဖွဈတယျ၊ သငျ့ အပွဈကို ရဟနျးသညျးခံပါတယျ”
မထရျေမွတျသညျ ငရဲသှားမညျ့ရှဲသမားနှိပျစကျသညျ့ ဒဏျရာကွောငျ့ပငျ မကွာမီ ပရိနိဗ်ဗာနျပွုရရှာသညျ။ ကွိုးကွာငှကျသညျ ရှဲသမား၏ မယားဖွဈသူ၏ ဝမျး၌ ပဋိသန်ဓယေူသညျ။ရှဲသမား၏ မယားသညျ စိတျထားနူးညံ့သညျ့ အတှကျ သသေညျ့အခါ နတျပွညျ၌ ဖွဈရသျောလညျး ရဟန်တာကို ပွဈမှားခဲ့သညျ့ ရှဲသမားသညျကား သသေညျ့အခါ ငရဲသို့ လားခဲ့ရရှာလတေော့သညျ ။
By – စိတွရံသီ
အညှနျး- ရဟနျးမစားသော ဆှမျးတနပျ
ဦးဇငျးကို ရဟနျးတှေ အတှကျလညျး ရေးပါအုံးလို့ ပွောပါတယျ။ ရဟနျးဘကျကတော့ သူကံတရား သူစီရငျပါလိမျ့မယျ။ မိမိဒကာ၊ ဒကာမတှေ ကိုယျ့ဘကျစိတျထားတတျအောငျ တငျပွရခွငျးပါ။ လိုကျနာခွငျး၊ မလိုကျနာခွငျးကတော့ အခွားသူရဲ့ ကဏ်ဍပဲလို့ မှတျပါတယျ။
အားလုံး ကိုယျ၊ စိတျ၊ နှလုံးရှငျလနျးခမျြးမွကွေ့ပါစေ။
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​သံဃာတော်တွေကို ပြစ်မှားလို့ လက်ရှိဘ၀မှာပင် ခံစားရတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပါ။ ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ
​သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေစဉ် ပင်လယ်ထဲမှ ထူးဆန်းသော လက်ကြီးပေါ်လာ
Camera Effect မဟုတ်ပါဘူးလို့ မင်းရာဇာ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် တင်ထားတာကို တွေ့ရပါသည်။
” ထူးဆန်းသော အဖြစ်ပြက်….ဒီနေ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး
မောင်းမကန်ကမ်းခြေမှာ ဇာတ်ကားရိုက်နေရင်း ပင်လယ်ထဲမှထူးဆန်းတဲ့ လက်ကြီးပေါ်လာ။ တပည့်မှမှတ်တမ်းးဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပေးရင်း Camera effect မဟုတ် ပြတ်သားစွာပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
နယ်ခံများမှပြောကြသည်မှာ Y8 စစ်လေယဉ်ပျက်ကြသောကျောက်နီမှော်ကမ်းခြေနားမှဖြစ်သည်လို့ပြောကြသည်။မကျွတ်မလွတ်များရှိခဲ့ပါက အမြန်ဆုံးကျွတ်လွတ်ကြပါစေဗျာ။
နောက်တယ်မထင်ပါနဲ့ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပေးပါလားသူငယ်ချင်းတို့?????????????????????? ” လို့သူကဆိုထားခဲ့ပါတယ် ။
ပုံတွေထဲမှာတော့ လက်ပြတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ ပုံရိပ်ကိုထင်းနေအောင် အားလုံးမြင်တွေ့နိုင်မှာပါ ။ ယုံကြည်ကြသူများက အမျှဝေဖို့ပြောကြသလို မယုံကြည်သူများကလည်း Camera Effect လိုပြောနေကြပေမယ့် မင်းရာဇာကတော့ တကယ့်အဖြစ်ပါလို့ဆိုပြီး သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံး ကြက်သီးများတောင်ထကုန်ကြရတယ်လို့ ထပ်မံပြောပြထားပါတယ် ။ မင်းသမီးဖူးစုံကလဲ တကယ်လား လို့လာရောက်မေးမြန်းခဲ့ပြီး မင်းရာဇာက ” ဟုတ်တယ်အမ တကယ် အားလုံး camera အကြောင်းနားလည်တဲ့သူကြည့်ဘဲ ” လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာမို့ နောက်ပြောင်နေတာမဟုတ်ဘဲ အတည်ပြောနေတယ်ဆိုတာတော့ သေချာသွားခဲ့ပါတယ် ။ ပရိတ်သတ်တို့ရော ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဟင် ။
သရုပျဆောငျ မငျးရာဇာ ဇာတျကားရိုကျကူးနစေဉျ ပငျလယျထဲမှ ထူးဆနျးသော လကျကွီးပျေါလာ
Camera Effect မဟုတျပါဘူးလို့ မငျးရာဇာ ဖစျေ့ဘုတျတှငျ တငျထားတာကို တှရေ့ပါသညျ။
မောငျးမကနျကမျးခွမှော ဇာတျကားရိုကျနရေငျး ပငျလယျထဲမှထူးဆနျးတဲ့ လကျကွီးပျေါလာ။ တပညျ့မှမှတျတမျးးဓာတျပုံလိုကျရိုကျပေးရငျး Camera effect မဟုတျ ပွတျသားစှာပျေါလာခွငျးဖွဈသညျ။
နယျခံမြားမှပွောကွသညျမှာ Y8 စဈလယေဉျပကျြကွသောကြောကျနီမှျောကမျးခွနေားမှဖွဈသညျလို့ပွောကွသညျ။မကြှတျမလှတျမြားရှိခဲ့ပါက အမွနျဆုံးကြှတျလှတျကွပါစဗြော။
နောကျတယျမထငျပါနဲ့ ဘာဖွဈနိုငျမလဲဆိုတာ စဉျးစားပေးပါလားသူငယျခငျြးတို့?????????????????????? ” လို့သူကဆိုထားခဲ့ပါတယျ ။
ပုံတှထေဲမှာတော့ လကျပွတျကွီးတဈခုရဲ့ ပုံရိပျကိုထငျးနအေောငျ အားလုံးမွငျတှနေို့ငျမှာပါ ။ ယုံကွညျကွသူမြားက အမြှဝဖေို့ပွောကွသလို မယုံကွညျသူမြားကလညျး Camera Effect လိုပွောနကွေပမေယျ့ မငျးရာဇာကတော့ တကယျ့အဖွဈပါလို့ဆိုပွီး သူတို့တဈဖှဲ့လုံး ကွကျသီးမြားတောငျထကုနျကွရတယျလို့ ထပျမံပွောပွထားပါတယျ ။ မငျးသမီးဖူးစုံကလဲ တကယျလား လို့လာရောကျမေးမွနျးခဲ့ပွီး မငျးရာဇာက ” ဟုတျတယျအမ တကယျ အားလုံး camera အကွောငျးနားလညျတဲ့သူကွညျ့ဘဲ ” လို့ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့တာမို့ နောကျပွောငျနတောမဟုတျဘဲ အတညျပွောနတေယျဆိုတာတော့ သခြောသှားခဲ့ပါတယျ ။ ပရိတျသတျတို့ရော ဘယျလိုမွငျကွလဲဟငျ ။
Author admin 1Posted on February 28, 2018 February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေစဉ် ပင်လယ်ထဲမှ ထူးဆန်းသော လက်ကြီးပေါ်လာ
​လူအိပ်သော်လည်း ကုသိုလ် မအိပ်သောအလှူ ( ၇ ) မျိုး
(၁) သစ်ပင် ပန်းမန် ဥယျဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း။
အလှူဒါန (၁၀) ပါး
၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ချိန်စဉ်းလဲ၊ တင်းစဉ်းလဲ အလှူဆိုတာက ရောင်းတဲ့(အလေး)တစ်မျိုး၊ ဝယ်တဲ့(အလေး)ကတစ်မျိုး၊ (*ချိန်ခွင်နဲ့ဈေးရောင်းသူ)၊
ဝယ်တဲ့ (ပြည်တောင်း)ကတစ်မျိုး(*ဆန်ရောင်းသူများ) ဖြစ်စေဖို့အတွက် အလေးချိန်ခွင် ပြည်တောင်းများကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ပေးလှူခြင်း စတဲ့အလှူဒါန
ထိုထိုသို့သော အလှူများက ကုသိုလ် မရသည့်အပြင် အပါယ်လေးပါးကကို ရောက်စေတတ်တာကြောင့်
အားလုံးသော သူများ အထူးရှောင်ကြဉ်ပြီး အပြစ်ကင်းသော ကုသိုလ်ြ ဖစ်သော ဒါနကောင်းမှု များစွာကို အားထုတ်ကြပြီး သီလ ဘာဝနာ ဝိပဿနာများကိုပါ အချိန် ရသလောက်စောင့်ထိန်း ပွားများနိုင်ကြကာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် အသက်ထက်ဆုံးသာသနာပြုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Credit – original uploader.
လူအိပျသျောလညျး ကုသိုလျ မအိပျသောအလှူ ( ၇ ) မြိုး
(၁) သဈပငျ ပနျးမနျ ဥယဉျြစိုကျပြိုးခွငျး။
(၂) အရိပျအာဝါသကောငျးသော အပငျမြား စိုကျပြိုးခွငျး။
(၃) ကားလမျး တံတား မွဈခြောငျးအငျးအိုငျ ဆောကျလုပျခွငျး။
(၄) ရခေမျြးစငျဆောကျလုပျ လှူဒါနျးခွငျး။
(၅) ရလှေောငျ တာတမံ ရတှေငျးရကေနျ လှူဒါနျးခွငျး။
(၆) ဇရပျ ဂူ ကြောငျး ဆောကျလုပျ လှူဒါနျးခွငျး။
(၇) ဆေး ပဒသောပငျ ဆှမျးပဒသောပငျမြား လှူဒါနျးခွငျး။
အလှူဒါန (၁၀) ပါး
၁။ သမဇ်ဇဒါန- ကခအြေလှူ ( အငွိမျ့ဇာတျပှဲ )
၂။ မဇ်ဇဒါန- သရေညျသရေကျအလှူ
၃။ ဣတ္ထိဒါန- မိနျးမအလှူ
၄။ ဥသဘဒါန- နှားလား၊ မွငျးလား အလှူ
၅။ စိတ်တကမ်မဒါန- ကာမဂုဏျကို နိုးကွှစသေော ပနျခြီဆေးရေး အလှူ
၆။ သတ္ထဒါန- လကျနကျ ခဲယမျးမီးကြောကျ အလှူ
၇။ ၀ိသဒါန- အဆိပျအလှူ
၈။ သင်ျခလိကဒါန- လကျထိတျ သံခွခေငျြး နှောငျကွိုးအလှူ
၉။ ကုက်ကုရ သူကရ ဒါန- ကွကျ ၀ကျ သားကောငျအလှူ
၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ခြိနျစဉျးလဲ၊ တငျးစဉျးလဲ အလှူတို့ဖွဈပါတယျ။
၁။ သမဇ်ဇဒါနလို့ချေါတဲ့ ကခအြေလှူ (အငွိမျ့ဇာတျပှဲအလှူ)ကတော့ ယခုခတျေ ရှငျပွု ရဟနျးခံ ပှဲတှမှော မြားစှာမှတှရေ့ပါတယျ။ ဆိုငျးဝိုငျးတှေ ဇာတျပှဲတှထေညျ့သှငျးပွီး ကငျြးပကွ ပါတယျ။ ရငျနှီးသူအခငျြးခငျြးလညျး “သူငယျခငျြး’’ မငျးရဲ့ ရှငျပွု ရဟနျးခံ ပှဲမှာ ငါလညျး ကု သိုလျဖွဈစဖေို့ ဇာတျပှဲလေး ဆိုငျးလေးတော့ထညျ့ဝငျလှူဒါနျးပါရစဆေိုပွီး” အပွဈကငျးတဲ့ အလှူဟု ထငျမှတျပွီး အပွဈမကငျးသော အပ်ပါယျလေးပါးရောကျစတေတျသော မကောငျးေ သာ အလှူကိုပေးလှူတတျကွပါတယျ။ အဲဒီအလှူဒါနသညျ ကုသိုလျမရသညျ့အပွငျ အပါယျလေးပါးကိုရောကျစတေတျပါသေွာေ ကာငျ့ အားလုံးသော ဒကာ ဒကာမ မြား ထိုထိုသော အလှူကိုမပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတ ယျ။
၂။ သရေညျသရေညျ (ဘီယာ ထနျးရညျ ဆေးခွောကျ)လို့ချေါတဲ့ မဇ်ဇဒါနပါ။ အဲဒီအလှူကို လညျး ယခုခတျေမှာ အမြားကွီးတှရေ့တတျပါတယျ။ မိမိရဲ့မှေးနမှေ့ာသျောလညျးကောငျး၊ အလုပျအကိုငျအဆငျပွလေို့ သျောလညျးကောငျး သူငယျခငျြး မိတျဆှေ မြားကို ဖိတျပွီး သေ ရညျ သရေကျ ဘီယာစသညျ့ဖွငျ့ ပေါ့လေ၊ ပွုလုပျကောငျး လှူဒါနျးကောငျး အပွဈကငျးသ ညျဟုထငျမှတျပွီး ဒါနပွု ကြှေးမှေးတဲ့အလှူဒါနကိုပွောလိုတာပါ။ တကယျတော့ အဲဒီဒါနဟာလညျး အပွဈမကငျးတဲ့ဒါန၊ ကုသိုလျမရတဲ့ ဒါန၊ အကုသိုလျဖွဈ တဲ့ဒါန၊ အပ်ပါယျလေးပါးရောကျစတေတျတဲ့ဒါနပါ။ ဒါကွောငျ့ထိုထိုသောဒါနကိုလညျး အား လုံးသော ဒကာ ဒကာမမြားမပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတယျ။
၃။ ဣတ္ထိဒါန ဆိုတာ မရိုသစေကား ယခုခတျေအတိုငျးတာနဲ့ပွောရမယျဆိုရငျ မိမိ၏ မိတျေ ဆှ သူငယျခငျြး ညီအဈကိုမြား ကာမဂုဏျပြျောပါးစဖေို့အတှကျ မိမိက အခကွေးငှအေကုနျ ကခြံပွီး ငှားရမျးပေးတဲ့ ပွညျ့တနျဆာအလှူဒါနကိုပွောလိုခွငျးဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို အခကွေးငှအေကုနျကခြံပွီးလုပျလိုကျတဲ့ အလှူဟာလညျး အပွဈမကငျး ကုသိုလျမရ အပ်ပါယျလေး ပါးရောကျစတေတျတဲ့ဒါနဖွဈလို့ ထိုထိုသော အလှူဒါနမြိုးကို မပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတ ယျ။
၄။ နံပါတျ(၄)ကတော့ နှားတို့မှာ ဦးဆောငျနှားလား ..မွငျးတို့မှာလညျး ဦးဆောငျမွငျးလားတို့ကို ပေးလှူတဲ့အလှူဒါနပါ။ ယခုခတျေမှာအနညျးငယျရှားပါးပါတယျ။ ၅။ စိတ်တကမ်မဒါန-ကာမဂုဏျကို နိုးကွှစသေော ပနျခြီဆေးရေး အလှူဆိုတာက မိမိမိတျဆှေ အပေါငျးသငျးနဲ့ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးမြားသို့ ကာမဂုဏျစိတျ ကာမရာဂစိတျတှဖွေဈပျေါ စတေတျသော အမြိုးသမီးဓာတျပုံမြား၊ ပွက်ခဒိနျမြား၊ ပနျးခြီရုပျမြားကိုပေးလှူတဲ့အလှူဒါနကိုဆို လိုခွငျးဖွဈပါတယျ။ ထိုထိုအလှူသညျလညျး အပွဈမကငျးသော ကုသိုလျမရသော အပါယျေ လးပါးရောကျစတေတျသော အလှူဒါနဖွဈသညျ့အတှကျ ထိုအလှူဒါနကိုလညျး မပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတယျ။
၆။ သတ္ထဒါန-လကျနကျ ခဲယမျးမီးကြောကျ အလှူ ဆိုတာက လူတဈဦးတဈယောကျ ဒါမှမဟု တျ အုပျစုတဈစု ဒါမှမဟုတျ အဖှဲ့တဈဖှဲ့စသညျဖွငျ့ပေါ့လေ၊ သတျဖွတျဖို့အတှကျ သစေေ နိုငျသော လကျနကျမြားကို အခမဲ့ လုပျပေးခွငျး ပေးလှူခွငျး အလှူဒါနကိုပွောခွငျးဖွဈပါတယျ။
၇။ ၀ိသဒါန- အဆိပျအလှူ ဆိုတာက တဈဦးတဈယောကျ ကိုသစေလေိုသောစတေနာဖွငျ့ သစေနေိုငျသော အဆိပျ ဆေးမြားကိုပေးလှူတဲ့ဒါနကိုချေါဆိုခွငျးဖွဈပါတယျ။
၉။ ကုက်ကုရ သူကရ ဒါန- ကွကျ ၀ကျ သားကောငျအလှူဆိုတာက သူတဈပါးအား အသကျရှ ငျလကျြရှိသော ကွကျ ဝကျ မြားကို ကိုယျတိုငျသတျပွီးတော့ဖွဈစေ သူတဈပါးအားသတျစေ ၍ဖွဈစေ ခကျြပွုတျစားသောကျရနျအလို့ငှာ လှူဒါနျးတဲ့အလှူဒါနမြိုးဖွဈပါတယျ။
၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ခြိနျစဉျးလဲ၊ တငျးစဉျးလဲ အလှူဆိုတာက ရောငျးတဲ့(အလေး)တဈမြိုး၊ ဝယျတဲ့(အလေး)ကတဈမြိုး၊ (*ခြိနျခှငျနဲ့ဈေးရောငျးသူ)၊
ဝယျတဲ့ (ပွညျတောငျး)ကတဈမြိုး(*ဆနျရောငျးသူမြား) ဖွဈစဖေို့အတှကျ အလေးခြိနျခှငျ ပွညျတောငျးမြားကိုထုတျလုပျရောငျးခခြွငျး၊ ဒါမှမဟုတျ ပေးလှူခွငျး စတဲ့အလှူဒါန
ယခုဖျောပွပွီးတဲ့ မပေးလှူကောငျးသော အပွဈမကငျးသော အပါယျလေးပါးကိုရောကျစေ တတျသော အလှူဒါနမြားကို အပွဈကငျးသော ကုသိုလျရသောအလှူဒါနဟု ထငျမှတျပွီး ပွု လုပျခဲ့မိရငျလညျး နောငျတတှေ စိတျမခမျြးသာမှုတှေ မဖွဈကွပဲ နောငျတဈကွိမျ မပေးလှူမိအောငျ မပွုလုပျမိအောငျ ဆငျခွငျကွစဖေို့ အထူးသတိပေးလိုပါတယျ။
ထိုထိုသို့သော အလှူမြားက ကုသိုလျ မရသညျ့အပွငျ အပါယျလေးပါးကကို ရောကျစတေတျတာကွောငျ့
အားလုံးသော သူမြား အထူးရှောငျကွဉျပွီး အပွဈကငျးသော ကုသိုလျွ ဖဈသော ဒါနကောငျးမှု မြားစှာကို အားထုတျကွပွီး သီလ ဘာဝနာ ဝိပဿနာမြားကိုပါ အခြိနျ ရသလောကျစောငျ့ထိနျး ပှားမြားနိုငျကွကာ စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာစှာဖွငျ့ အသကျထကျဆုံးသာသနာပွုနိုငျသော ပုဂ်ဂိုလျမြားဖွဈပါစလေို့ဆန်ဒပွု ဆုတောငျးလိုကျပါတယျ။
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​လူအိပ်သော်လည်း ကုသိုလ် မအိပ်သောအလှူ ( ၇ ) မျိုး
​အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဖတ်ကြည့်ရင် အကျိုးမယုတ်မယ့် စာ
အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်
ကျွန်တော့်ဇနီး ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။
သူကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေပြီး ညစာစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်မှုကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
ကျွန်တော်ဘယ်ကစပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာတွေ တွေးနေတယ် ဆိုတာကို သူ့ကိုပြောရမှာပါ။
ကျွန်တော် သူ့ကို ကွာရှင်းဖို့ ကိစ္စပေါ့။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ကျွန်တော်စပြောခဲ့တယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့ ကျွန်တော့်စကားလုံးတွေ ကို စိတ်ပျက်နေပုံမတွေ့ရဘူး။ ကျွန်တော့်ကို နူးညံ့စွာပဲ မေးခဲ့ပါတယ်။ “ဘာကြောင့်လဲ” တဲ့။
သူ့မေးခွန်းကို မဖြေဘဲ စကားလွှဲလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ သူဒေါသထွက်သွားတယ်။ လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ တူတွေကို လွှင့်ပစ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုအော်တယ်။
အဲဒီညက ကျွန်တော်တို့ စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။
သူကတော့ ငိုပဲ ငိုနေခဲ့ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ ဘာမှားယွင်းနေလဲ သူတွေးနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူကျေနပ်မယ့်အဖြေမျိုး ကျွန်တော်မပေးနိုင်တာ ခက်တယ်။ ကျွန်တော် ဂျိန်းကို ချစ်မိနေလို့ သူ့ကိုဆက်မချစ်နိုင်တော့တာပါ။
သူ့ကို ကရုဏာသက်ရုံကလွဲလို့ ကျွန်တော်ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်တော်တော်ကြီးတယ်လို့ ခံစားနေရင်းပဲ ကွာရှင်းဖို့ သဘောတူညီချက်တွေကို ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ လက်ရှိအိမ်ရယ် ကားရယ် ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီက ရှယ်ယာ ၃၀% ရယ်ကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ အဲဒီသဘောတူညီချက်ကို ဖြတ်ကနဲ တစ်ချက်ကြည့်ပြီး အပိုင်းပိုင်းအစစ စုတ်ဖြဲပစ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ ဆယ်နှစ်လုံးလုံးပေါင်းသင်းလာတဲ့ မိန်းမဖြစ်ပေမယ့် ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း သူစိမ်းဆန်လာသလို ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ အချိန်တွေ၊ စွမ်းအင်တွေကို ဖြုန်းတီးသလို ဖြစ်ခဲ့တာကို ဝမ်းနည်းပေမယ့် ဂျိန်းကို နူးညံ့ငြင်သာစွာ ပြောခဲ့တဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို တော့ ပြန်မရုတ်သိမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ သူဟာ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ကျွန်တော်မျှော်လင့် ထားခဲ့သလို ကျယ်လောင်စွာ ငိုကြွေးပါတော့တယ်။
သူဒီလို ငိုနေတာက ကျွန်တော့်ကို သက်သာရာ ရစေပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ တနုံ့နုံ့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ကွာရှင်းခြင်းဟာ ခုတော့ ပိုမိုရှင်းလင်းခိုင်မာလာပါပြီ။
နောက်တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်အိမ်ကို တော်တော်နောက်ကျမှ ပြန်လာတော့ သူ့မှာကို စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး စာရေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ညစာ မစားခဲ့ရသေးပေမယ့် တစ်နေ့ကုန် ဂျိန်းနဲ့ စီစဉ်စရာရှိတာ တွေ စီစဉ်ခဲ့ရတော့ မြန်မြန်အနားယူချင်တာပဲ သိပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ရေးနိုးလာတော့ သူ့ကို စားပွဲ မှာပဲ စာရေးနေတာ တွေ့တယ်။ သိပ်စိတ်မဝင်စားလို့ ဟိုဖက်လှည့်ပြီး ဆက်အိပ်ခဲ့ပါတယ်။
မနက်ရောက်တော့ ကွာရှင်းခြင်းအတွက် သူ့ဖက်က တောင်းဆိုချက်တွေကို ကျွန်တော့ကို ပြပါတယ်။
သူ ကျွန်တော့်ဆီက ဘာမှမလိုချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မကွာရှင်းခင် တစ်လကြိုတင် အကြောင်းကြားဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲလို တောင်းဆိုပြီး တစ်လအတွင်းမှာ သာမန် ဘာမှမဖြစ်သလို နေထိုင်ဖို့ လည်း သူကတောင်းဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။
ရှေ့လမှာ ကျွန်တော်တို့ သားရဲ့ စာမေးပွဲရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုကြောင့် သားရဲ့ပညာရေးကို မထိခိုက်စေချင် တာပါပဲ။
ဒါကို ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဖက်ကတောင်းဆိုတာ နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်။
သူ တောင်းဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့က သတို့သမီးဝတ်စုံလဲခန်းထဲကနေ သူ့ကို ပွေ့ချီပြီးခေါ်ထုတ်ခဲ့သလို ပြန်သရုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါပဲ။
အဲဒီတစ်လအတွင်းမှာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကျွန်တော်တို့ အခန်းထဲကနေ အိမ်ရှေ့တံခါးထိ သူ့ကိုပွေ့ချီပြီး ခေါ်ထုတ်ဖို့ပါပဲ။
ကျွန်တော် ထင်လိုက်တာကတော့ သူရူးနေပြီဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံး လတစ်လကို အတူတူသည်းခံမှာပဲလေ ဆိုပြီးတော့ ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလည်း ကျွန်တော် လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
ဂျိန်းကို ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေကို ပြောပြလိုက်တယ်။ ဂျိန်းက အော်ရယ်ပြီး တော်တော် ကို့ရိုးကားယားနိုင်တာပဲ လို့ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီး ဘာလှည့်ကွက်တွေပဲ လုပ်နေလုပ်နေ ဒီကွာရှင်း မှုကို ရင်ဆိုင်မှာပဲလို့ အရေးမစိုက်သလိုပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်ရော ကျွန်တော့်ဇနီးရော ကွာရှင်းမှုမလုပ်ရသေးသ၍ ဘယ်သူ့ကိုမှ အဆက်အသွယ် သိပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။
ပထမဆုံး သူ့ကို အခန်းထဲက ပွေ့ချီပြီးခေါ်ထုတ်ရမယ့်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး အချိုးမပြေတဲ့ပုံစံပေါက်နေပါတယ်။
သားကတော့ ကျွန်တော့်တို့ နောက်ကနေ ဖေ့ဖေ့ကမေမေ့ကို ပွေ့ထားတယ်ကွဆိုပြီး လက်ခုပ်တွေတီးနေပါတော့တယ်။ သားရဲ့ စကားလုံးတွေက ကျွန်တော့်ကို နာကျင်စေပါတယ်။
အိပ်ခန်းထဲကနေထွက်တယ်၊ ဧည့်ခန်းကိုဖြတ်တယ်၊ ပြီးတော့ တံခါးဆီကိုသွားတယ်။ သူ့ကို ပွေ့ချီပြီး ဆယ်မီတာလောက် ကျွန်တော် လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူကတော့ မျက်လုံးတွေမှိတ်ထားပြီး ကွာရှင်းမယ့်အကြောင်း သားလေးကို မပြောဖို့ တိုးတိုးလေး ကျွန်တော့်ကို ပြောနေပါတယ်။
ကျွန်တော့်ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို စိတ်ပျက်သလို ခံစားရပါတယ်။ အိမ်ပြင်ရောက်တော့ သူ့ကိုအောက်ချပေးလိုက်ပါတယ်။
သူက အလုပ်သွားဖို့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ဆီ လမ်းလျှောက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရုံးကို ကားမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး သရုပ်ဆောင်ရတာ ပိုလွယ်လာပါပြီ။ သူက ကျွန်တော့ ရင်အုံပေါ်မှာ မှီထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဘလောက်စ်အကျီင်္က ရနံ့လေးတွေတောင် ကျွန်တော် ရနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီမိန်းမကို သေချာမကြည့်ဖြစ်တာ တော်တော်တောင် ကြာနေပြီ ဆိုတာလည်း သတိထားမိတယ်။
ထပ်ပြီးသတိထားမိတော့တာကတော့ သူ မငယ်တော့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ သူ့ရဲ့မျက်နှာ ပေါ်မှာ အရေးအကြောင်းတွေ တွေ့နေရပါပြီ။
သူ့ဆံပင်ကလည်း ခပ်မွဲမွဲဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝက သူ့ကို ဒါမျိုးဖြစ်စေတာလားဆိုတာ ကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်။
စတုတ္ထမြောက်နေ့မှာတော့ သူ့ကိုစပြီး ပွေ့ချီလိုက်ချိန်မှာပဲ ရင်းနှီးတဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်ခု ပြန်ရလိုက်ပါတယ်။
ဒီမိန်းမဟာ သူ့ဘဝရဲ့ ဆယ်နှစ်တာကာလကို ကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့တာပဲ။ ပဉ္စမမြောက်နေ့နဲ့ ဆဌမမြောက်နေ့မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကြားထဲက ရင်းနှီးမှုဟာ ပိုမိုကြီးမားလာခဲ့တာကို ခံစားရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ ကျွန်တော် ဂျိန်းကို မပြောဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ကို ပွေ့ချီပြီးလမ်းလျှောက်ရတာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမို ပေါ့ပါးလာသလိုခံစားရပါတယ်။
နေ့စဉ်လုပ်နေရတာဆိုတော့ အကျင့်ဖြစ်သွားတယ် ထင်ပါရဲ့။
တစ်နေ့မနက်ခင်းမှာတော့ သူဘာဝတ်ရမလဲ ရွေးနေပါတယ်။ ဝတ်စုံ လေးငါးစုံ လဲကြည့်ပြီးတာတောင် သူမကျေနပ်သေးဘူး။ ပြီးတော့ သူသက်ပြင်းပြီးပြောတယ်။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်သတိထားမိတာက သူတော်တော်ပိန်သွားတယ်ဆိုတာပဲ။
အော်… ဒါကြောင့် သူ့ကို ပွေ့ချီပြီးလမ်းလျှောက်ရတာ တဖြည်းဖြည်းပေါ့လာတာကိုး။
ရုတ်တရက် ဖြတ်အရိုက်ခံရသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ သူဟာ နာကျင်မှုတွေနဲ့ ခါးသီးမှုတွေကို သူ့နှလုံးသား ထဲမှာပဲ သိမ်းထားတာကိုး။
ဘာလုပ်မိမှန်းမသိလိုက်ခင်ပဲ ကျွန်တော် သူ့အနားရောက်သွားပြီး သူ့ခေါင်းကို အသာအယာထိလိုက်မိတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သားက ဝင်လာပြီး ပြောတယ်။
“ဖေဖေရေ… မေ့မေ့ကို ပွေ့ခေါ်ရမယ့် အချိန်ရောက်ပြီလေ”
သားအတွက်ကတော့ သူ့ဖေဖေက သူ့မေမေကို ပွေ့ပြီးခေါ်ထုတ်တာဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလို့ လက်ခံထားပုံရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးက သားကို လက်ယပ်ခေါ်ပြီး ခပ်တင်းတင်းပွေ့ဖက် ထားပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ မျက်နှာလွှဲထားခဲ့ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်စိတ်ပြောင်းလဲသွားမှာ စိုးလို့ပါပဲ။ အဲဒါပြီးတော့ ကျွန်တော် သူ့ကို ပွေ့ချီလိုက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ အခန်းထဲက လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်၊ ဧည့်ခန်းကိုဖြတ်ပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးထိ ပေါ့။
သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို ညင်ညင်သာသာနဲ့ ဘာမှမဖြစ်သလို ပွေ့ဖက်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပွေ့ထားပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ နေ့ကအတိုင်း အတိအကျပါပဲ။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပိုမိုပေါ့ပါးလာတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက ကျွန်တော့်ကို ဝမ်းနည်းစေပါတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့ရောက်လို့ သူ့ကို ပွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ခြေလှမ်းတိုင်း ခြေလှမ်းတိုင်း ကို ခက်ခက်ခဲခဲ လှမ်းနေရပါတော့တယ်။
သားကတော့ ကျောင်းသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်သူ့ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေ့ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
“ငါတို့ကြားတဲ့က ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုတွေ ပျောက်ပျက်သွားမှာ ငါမလိုချင်တော့ဘူး”
အဲလိုပြောပြီးတော့ ရုံးကို ချက်ချင်းကားမောင်းလာခဲ့တယ်။ ကားထဲက ခပ်မြန်ြမန်ခုန်ထွက်တယ်။ ကားတံခါးတောင် လော့မချမိဘူး။
ဒီအချိန်မှာ နှောင့်နှေးမှုတစ်ခုခုက ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပြောင်းလဲသွားမှာ ကျွန်တော် ကြောက်လို့ပါပဲ။ ကျွန်တော် ရုံးအပေါ်ထပ်ကို တက်သွားတယ်။ ဂျိန်းရဲ့အခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီး ဂျိန်းကို ပြောလိုက်တယ်။
“ဆောရီပါ ဂျိန်းရယ်… ငါမကွာရှင်းတော့ဘူး”
ဂျိန်းက ကျွန်တော့်ကိုအံ့အားတသင့်နဲ့ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်နဖူးကို စမ်းပြီးမေးတယ်။
ကျွန်တော် နဖူးပေါ်က ဂျိန်းရဲ့လက်ကိုဆွဲဖယ်လိုက်ပါတယ်။
“ဆောရီး ဂျိန်း… ငါမကွာရှင်းနိုင်တော့ဘူး” လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။
“ငါ့ရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝဟာ ငါနဲ့ ငါ့ဇနီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မချစ်တော့လို့ ပျင်းစရာ ကောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟာ။
ငါတို့ ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးကို ငါတို့ နားမလည်ခဲ့လို့ပါ။ အခုငါသဘောပေါက် သွားပြီ။ သူ့ကို ငါတို့ မင်္ဂဆောင်တဲ့နေ့ကလို အခန်းထဲကနေ ပွေ့ချီပြီး နေ့တိုင်း ခေါ်ထုတ်သွားတော့မယ်။
ငါတို့ သေခွဲခွဲရတဲ့ နေ့အထိပေါ့ဟာ။” လို့ ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်တယ်။
ဂျိန်း က ရုတ်တရက် အိပ်ရာကနိုးထလာသူလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဖျန်းခနဲရိုက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တံခါးကို ဆောင့်ပိတ်သွားပြီး အကြီးအကျယ်ငိုကြွေးနေပါတော့တယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ အောက်ထပ်ကို ပြန်ဆင်းလာပြီး ကားလျှောက်မောင်းနေမိပါတော့တယ်။ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ပန်းဆိုင်မှာ ဇနီးသည်အတွက် ပန်းခြင်းတစ်ခြင်း ဝင်မှာခဲ့ပါသေးတယ်။
အရောင်းစာရေးမလေးက ကဒ်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုရေးပေးရမလဲ လို့ မေးတော့ ကျွန်တော်ပြုံးပြီးဖြေလိုက်တယ်။
“ငါတို့ မသေမချင်း မင်းကိုနေ့စဉ် အခန်းထဲကနေ ပွေ့ချီပြီး ခေါ်ထုတ်သွားပါ့မယ်” လို့ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီညနေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာက ပန်းတွေနဲ့ ကျွန်တော့မျက်နှာပေါ်မှာက အပြုံးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။
လှေကားထစ်တွေကို ကျွန်တော်ပြေးတက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလို ပြေးတက်လာခဲ့တာဟာ အိပ်ခန်းထဲက သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဇနီးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်ဖို့သက်သက်ဖြစ် လာပါတော့တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဇနီးသည်ဟာ ကင်ဆာရောဂါကို ခံစားနေခဲ့ရတာ လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နေခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်ကသာ အလုပ်တွေများလွန်းလို့ သတိမထားမိခဲ့တာ။
သူကတော့ သူမသေခင်မှာ သားကကျွန်တော့်အပေါ် အဆိုးမြင်သွားမှာ လုံးဝမလိုလားခဲ့ဘူးလေ။
ကျွန်တော်တို့ ကွာရှင်းဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် သားရဲ့ အမြင်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ယောက်ကျားကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နေစေချင်ခဲ့တယ်။
ကဲ… သင့်ဘဝမှာ ဘာအရေးကြီးလဲ သင်သိလောက်ပါပြီ။ ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ သယ်ယူလာနိုင်တာ ဘာတွေလဲ။
အိမ်ကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူး၊ ကားကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ပိုက်ဆံတွေ လည်းမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒါတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပျော်စရာဖြစ်အောင်တော့ လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ ပျော်စရာတွေ မပေးစွမ်းနိုင်ပါဘူးလေ။
ဒါကြောင့် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို ရင်းနှီးခင်မင်မှုလေးတွေ တည်ဆောက်လိုက်ပါ။ သင့််ရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝသာယာနိုင်ပါစေ။
ဒီစာကို သင်ပြန်လည် မမျှဝေလည်း ဘာမှ ဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မျှဝေလိုက်ရင်တော့ သင်ဟာ အိမ်ထောင်သည်ဘဝတစ်ခုကို ကယ်တင်လိုက်နိုင်တာပါပဲ။
ပေးဆပ်လိုက်ရင် ဘာတွေအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာ မသိတဲ့ လူတွေပဲ ကျရှုံးကြတာပါ။
သူကတော့ ငိုပဲ ငိုနခေဲ့ပါတော့တယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိမျထောငျသညျဘဝမှာ ဘာမှားယှငျးနလေဲ သူတှေးနမေယျဆိုတာ ကြှနျတျောသိပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ဘလောကျဈအကြီင်္က ရနံ့လေးတှတေောငျ ကြှနျတျော ရနခေဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောဒီမိနျးမကို သခြောမကွညျ့ဖွဈတာ တျောတျောတောငျ ကွာနပွေီ ဆိုတာလညျး သတိထားမိတယျ။
စတုတ္ထမွောကျနမှေ့ာတော့ သူ့ကိုစပွီး ပှခြေီ့လိုကျခြိနျမှာပဲ ရငျးနှီးတဲ့စိတျခံစားမှုတဈခု ပွနျရလိုကျပါတယျ။
ဒီမိနျးမဟာ သူ့ဘဝရဲ့ ဆယျနှဈတာကာလကို ကြှနျတေျာ့ကို ပေးခဲ့တာပဲ။ ပဉ်စမမွောကျနနေဲ့ ဆဌမမွောကျနမှေ့ာလညျး ကြှနျတျောတို့ ကွားထဲက ရငျးနှီးမှုဟာ ပိုမိုကွီးမားလာခဲ့တာကို ခံစားရပါတယျ။
အဲလိုပွောပွီးတော့ ရုံးကို ခကျြခငျြးကားမောငျးလာခဲ့တယျ။ ကားထဲက ခပျမွနျမနျခုနျထှကျတယျ။ ကားတံခါးတောငျ လော့မခမြိဘူး။
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဖတ်ကြည့်ရင် အကျိုးမယုတ်မယ့် စာ
​၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်​ဝင်​ စာ​မေးပွဲ အချိန်​စာရင်း ထွက်ပြီ
မတ်​လ ၇ ရက်​ကနေ ၁၆ရက်​​အထိ ကျင်းပမှာပါ၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်​၀င် ​စာ​မေးပွဲ အချိန်​စာရင်း ကို ပညာ​ရေးဝန်​ကြီးဌာနက ​ကြေညာလိုက်ပြီး စာ​မေးပွဲကို ၂၀၁၈ မတ်​လ ၇ ရက်​ကနေ ၁၆ ရက်​​အထိ တစ်နိုင်​ငံလုံး စစ်​​ဆေး မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မတ်​လ ၇ ရက်​မှာ​ မြန်​မာစာ၊ ၈ ရက်​မှာ အင်္ဂလိပ်​စာ၊ ၉ ရက်​မှာ သင်္ချာ၊ ၁၂ ရက်​မှာ ဓာတု​ဗေဒနဲ့ စိတ်​ကြိုက်​မြန်​မာစာ၊ ၁၃ ရက်​မှာ ရူပ​ဗေဒ၊ ၁၄ ရက်​မှာ ဇီဝ​ဗေဒနဲ့ ဘောဂဗေဒ၊ ၁၅ ရက်​မှာ ပထ၀ီဝင်​၊ ၁၆ ရက်​မှာ သမိုင်း ဘာသာရပ် တွေကို​ ဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတ်​လ ၁၀ ရက်​ (စ​နေ) နဲ့ ၁၁ ရက်​ (တနင်္ဂ​နွေနေ့) တွေမှာတော့ စာ​မေးပွဲ မကျင်းပဘဲ ရပ်နားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျင်းပမယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်​ စာ​မေးပွဲ ​မေးခွန်း တချို့ကို အလွတ်ကျက်​​ဖြေဆိုရတဲ့ ပုံစံအစား စဉ်းစား​တွေး​ခေါ်​ဖြေဆိုရတဲ့ ပုံစံ​​ပြောင်းလဲမယ်လို့ ၀န်​ကြီးဌာနက ကြေညာထားပါတယ်။
၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်​၀င် စာ​မေးပွဲ ဖြေဆိုဖို့ ​လျှောက်​ထားတဲ့ ကျောင်းသား​၊ ​ကျောင်းသူ ၈၄၀,၀၀၀​ ခန့်ရှိပြီး အရင်နှစ်ထက်​​ ဖြေဆိုသူ ၈၀,၀၀၀ ခန့်တိုးလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီနှစ်ကျင်းပမယ့် တက္ကသိုလ်​၀င် စာ​မေးပွဲ မှာ အထက်​တန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမအားလုံး စာမေးပွဲ အဖြေလွှာ စစ်​​ဆေး ရမည်​ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးခ တစ်​အုပ်​ကို ယခင်​ ကျပ်​၇၀ ​ပေးထားတာကနေ ကျပ်​ ၃၀၀ အထိ တိုးမြှင့်ပေးမယ်လို့ မြန်မာနိုင်​ငံစာစစ်​ဦးစီးဌာနက ​ကြေညာထားပါတယ်။
၂၀၁၈ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ အခြိနျစာရငျး ထှကျပွီ
မတျလ ၇ ရကျကနေ ၁၆ရကျအထိ ကငျြးပမှာပါ၂၀၁၈ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ အခြိနျစာရငျးကို ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ကွညောလိုကျပွီး စာမေးပှဲကို ၂၀၁၈ မတျလ ၇ ရကျကနေ ၁၆ ရကျအထိ တဈနိုငျငံလုံး စဈဆေးမယျလို့ သိရပါတယျ။
မတျလ ၇ ရကျမှာ မွနျမာစာ၊ ၈ ရကျမှာ အင်ျဂလိပျစာ၊ ၉ ရကျမှာ သင်ျခြာ၊ ၁၂ ရကျမှာ ဓာတုဗဒေနဲ့ စိတျကွိုကျမွနျမာစာ၊ ၁၃ ရကျမှာ ရူပဗဒေ၊ ၁၄ ရကျမှာ ဇီဝဗဒေနဲ့ ဘောဂဗဒေ၊ ၁၅ ရကျမှာ ပထဝီဝငျ၊ ၁၆ ရကျမှာ သမိုငျးဘာသာရပျတှကေို ဖွဆေိုရမှာ ဖွဈပါတယျ။
မတျလ ၁၀ ရကျ (စနေ) နဲ့ ၁၁ ရကျ (တနင်ျဂနှနေေ့) တှမှောတော့ စာမေးပှဲမကငျြးပဘဲ ရပျနားမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခုကငျြးပမယျ့ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ မေးခှနျးတခြို့ကို အလှတျကကျြဖွဆေိုရတဲ့ ပုံစံအစား စဉျးစားတှေးချေါဖွဆေိုရတဲ့ ပုံစံပွောငျးလဲမယျလို့ ဝနျကွီးဌာနက ကွညောထားပါတယျ။
၂၀၁၈ တက်ကသိုလျဝငျ စာမေးပှဲဖွဆေိုဖို့ လြှောကျထားတဲ့ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူ ၈၄၀,၀၀၀ ခနျ့ရှိပွီး အရငျနှဈထကျ ဖွဆေိုသူ ၈၀,၀၀၀ ခနျ့တိုးလာတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီနှဈကငျြးပမယျ့ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲမှာ အထကျတနျးပွ ဆရာ၊ဆရာမအားလုံး စာမေးပှဲအဖွလှော စဈဆေးရမညျဖွဈပွီး စဈဆေးခ တဈအုပျကို ယခငျ ကပျြ၇၀ ပေးထားတာကနေ ကပျြ ၃၀၀ အထိ တိုးမွှငျ့ပေးမယျလို့ မွနျမာနိုငျငံစာစဈဦးစီးဌာနက ကွညောထားပါတယျ။
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်​ဝင်​ စာ​မေးပွဲ အချိန်​စာရင်း ထွက်ပြီ
ဆော့တတ်တဲ့ခလေးကို လွတ်ပေးထားလို့ရေနစ်သေဆုံးရတဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့်လို့အစောပိုင်းမှာ သတင်းထွက်နေပေမယ့် .. တကယ့်အဖြစ်မှန် မှတ်တမ်းတင်ထား တဲ့CCTV မှတ်တမ်းကို ရဲတွေက စစ်ဆေးလိုက်တော့မှ မိခင်အရင်းဟာ ခလေးကို ကန်ထဲ တွန်းချသတ်ခဲ့တာပေါ်သွားပါတယ်။
သုံးနှစ်သားယောက်ကျားလေးရေနစ်သေဆုံးတဲ့အထိ သွေးအေးအေးနဲ့ကြည့်ပြီးမှ အိမ်ပြန်လာတဲ့ အသက် ၂၁နှစ်မိခင်က သူမမမွေးနိုင်တော့လိုပါလို့ရဲစခန်းမှာ ထွက်ဆိုသွားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ နုံထဘူရီပြည်နယ် ဘန့် ဘိုထောင်းခရိုင်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ
ဆော့တတျတဲ့ခလေးကို လှတျပေးထားလို့ရနေဈသဆေုံးရတဲ့ ပေါ့ဆမှုကွောငျ့လို့အစောပိုငျးမှာ သတငျးထှကျနပေမေယျ့ .. တကယျ့အဖွဈမှနျ မှတျတမျးတငျထား တဲ့CCTV မှတျတမျးကို ရဲတှကေ စဈဆေးလိုကျတော့မှ မိခငျအရငျးဟာ ခလေးကို ကနျထဲ တှနျးခသြတျခဲ့တာပျေါသှားပါတယျ။
သုံးနှဈသားယောကျကြားလေးရနေဈသဆေုံးတဲ့အထိ သှေးအေးအေးနဲ့ကွညျ့ပွီးမှ အိမျပွနျလာတဲ့ အသကျ ၂၁နှဈမိခငျက သူမမမှေးနိုငျတော့လိုပါလို့ရဲစခနျးမှာ ထှကျဆိုသှားပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံ နုံထဘူရီပွညျနယျ ဘနျ့ ဘိုထောငျးခရိုငျအတှငျးမှာ ဖွဈပှားခဲ့တာ
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ရက်စက်ပါပေ့ မိခင်ရယ်
​R2P ​တွေ ဖာ2P ​တွေလိမ့်​​အော်​ပြီး သူများတိုင်းပြည်​ကိုကျူး​ကျော်​ ဖို့ စဉ်းစား​နေရင်​​တော့​ပြောလိုက်​မယ်​**
၁၀ ဆ ဆိုးသွားမယ်​****
သူများနိုင်​ငံကိုလည်း မကျူး​ကျော်​ဘူး
ကို့ နိုင်​ငံလည်း လာထိဖို့မစဉ်​စားနဲ့***
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​R2P ​တွေ ဖာ2P ​တွေလိမ့်​​အော်​ပြီး သူများတိုင်းပြည်​ကိုကျူး​ကျော်​ ဖို့ စဉ်းစား​နေရင်​​တော့​ပြောလိုက်​မယ်​**
​မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြစဉ်က နှောင်းလူတို့ မသိ့ခဲ့ကြရသော ပြဿနာများ
ပုထိုးတော်ကြီး တည်ထားရာတွင် ဌာပနာတိုက် (၂၁) တိုက် ထည့်သွင်း ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အလယ် ဌာပနာတိုက်မကြီးကို ကြေးသလွဲမည်း အချိန် (၄၁၄၈၃၄) ဖြင့် စတုရန်း (၁၀) တောင်၊ အစောက် (၇) တောင် အထူ (၁) အရွယ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါသည်။ အလယ် တိုက်၏ အရှေ့ဘက်တွင် အချင်း (၃) တောင် (၂)မိုက် ၊ အစောက် (၄) တောင် အရွယ် ရှိသောကြေးစင်တိုက် (၂) တိုက်ကို “သ-သံ-ပူ-က” အက္ခရာ (၄) လုံးဖြင့် ရေးသားထားရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းမှာ နတ်သိကြားမင်း ကူညီသည်ဟူသော ပါဠိစာပိုဒ် တစ်ခုကို အတိုချုံ့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းအလယ်တိုက်မကို ခြံရံ၍ တစ်တိုက်လျှင် အချင်း (၃) တောင် (၂) မိုက် ၊ အစောက်(၇)တောင် အထူ (၁)မိုက် ၊ ကို ကြေးချိန်ပိဿာ (၁၂၂၆၀၃) ပိဿာ ၊ (၇၀) သား ရှိ ဌာပနာတိုက်တို့ ရှိကြပါသည်။အရှေ့ဘက်တွင် ဌာပနာ တိုက် (၅) တိုက် ၊ အနောက် ဘက်တွင် ဌာပနာတိုက် (၅) တိုက် ၊ တောင်ဘက်တွင် ဌာပနာတိုက်(၅) တိုက်၊👉မြောက်ဘက် တွင် ဌာပနာတိုက် (၅) တိုက် စီကိုတည်ဆောက် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ဌာပနာတိုက် (၂၁) တိုက်၏ ကြေးသလွဲ ပိဿာချိန် စုစုပေါင်းမှာ – (၂၈၆၆၉၀၈) ကျော် ဖြစ်ပါသည်။
(၁၁၅၈) ခုနှစ် ၊ တပေါင်းပြည့်နေ့၊ (၁၇၉၇)ခုနှစ် မတ်လတွင် ထိုဌာပနာတိုက်များ အတွင်းသို့ နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူ ဆင်းတုများကို ရွှေရုပ်တု (၂)ဆူ ၊ ငွေရုပ်တု (၂)ဆူ ၊ ဖူးမျှော်နေသော ရွှေငွေရုပ် (၄)ရုပ်စီနှင့် ၊ ပွင့်တော်မူပြီးသော သစ်ပင် တို့ကို လည်း ရွှေငွေတို့ဖြင့် ထုလုပ်ထားခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဗုဒ္ဓဝင်ခန်းများနှင့် အောင်ခြင်း(၈)ပါး တို့ကိုလည်း ရွှေရုပ် ငွေရုပ် များဖြင့် ထုလုပ်ကာ ဌာပနာထားရှိ ခဲ့ပြန်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား ဝါဆိုစဉ်က တရားဟောကြားခဲ့သော ရုပ်တု အပါအဝင် ရွှေ၊ ငွေ၊ မြ၊ပယင်း၊ မြင်းသီလာ၊ ပဉ္စလောဟာ၊ ဖန်၊ အန္တကူကျောက်၊ နီလာ၊ ကျောက်သလင်း၊ ကျောက်စိမ်း၊ ကြေး၊ သလွဲဖြူ၊ ဒက္ခိဏသာခါ၊ ဆင်စွယ်၊ ကရမက်၊ နံ့သာ၊ ကံ့ကူကျောက်ဖြူ၊ ကျောက်ညို၊ ကျောက်ဝါဆင်းတုများ အပါအဝင် ဆင်းတုတော် စုစုပေါင်း (၄၄၁၉၅) ဆူ ၊ စေတီပေါင်း (၂၉၁၀)၊ ကျောင်း၊ ဇရပ်၊ သားတော်၊ သမီးတော်၊ မှူးကြီးမတ်ရာပုံများစွာတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ဌာပနာ ခဲ့ပြန်ပါသည်။
စာဆိုတော် ဒုတိယ နဝဒေးကြီးက သူ၏ ဝိလာသိနီ မော်ကွန်းတွင်- မင်းကွန်းသပြေ ၊ မည်တွင် စေလျက်၊ ဆယ့်နှစ်ခွေပြိုင်၊ နောဒတ်အိုင်သို့ ၊ ငါးဆိုင်တောင်စပ်၊ တည်ရာရပ် တွင်၊ သင်းကျစ်ပတ္တမြား၊ စွယ်တော်ပွားကို ၊ မှံထားစုပုံ၊ ထူပါရုံဟု၊ နတ်ဘုံ နိမ့်မြင့်၊ တောင်ကြီးသင့်သို့ ၊ ဆင့်ဆင့်ပတ်ခြံ ၊ အာလိန်ခံဖြင့်၊ ဒိသံမ္ပတိ၊ မင်းကြီး လက်ပြိုင်၊ ရွှေအုပ်ကိုင်၍၊ ကိုယ်တိုင်တော်နေ၊ သို့ ဖြစ်ထွေကို၊ အောက်မြေအ ထဲ၊ ငရဲနဂါး၊ မိုးဖျားဗြဟ္မာ ၊ သူရာဝှန်လှိုက်၊ ကျိုက်ကျိုက်မွန်နည်၊ သိစိမ့် ရည် သည်၊ ဆောက်တည်ရွှေနှလုံး စွဲတည်း။ ဟုစပ်ဆို ရေးသား ထားခဲ့ပြန်ပါသည်။
“သိကြားတံဆိပ်၊ ရွှေလိပ်ခရာ၊ ဖြစ်ရုံကာမျှ၊ စုလ္လာသီတိ၊ သဟာဿိထက်၊ မုနိစူဠာ၊ စေတီသာကို၊ ဣန္ဒာဗိုလ်ရူ၊ သဘင်ပြုသို့၊ အကုဋေနတ်၊ လောကဓာတ်၌၊ ပတ် ပတ်ရစ်ခြံ၊ ပွဲကြီးခံ၍ ၊ သ သံ ပု က ၊ စာမအကျော်၊ လေးလုံးပေါ်သား ၊ ထို ရောမခါနှစ် ၊ ဓိပ္ပါယ်ဖြစ်မူ”ဟု စပ်ဆိုထားခဲ့ ပြန်ပါသည်။
ဌာပနာ စာရင်းများကို ကုန်းဘောင် မဟာရာဇဝင် တော်ကြီးထဲတွင် ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြထားရှိပါသည်။ ထိုအပြင် ပုထိုးတော်ကြီး၏ အဝလေးမျက်နှာတို့၌ အုတ်တိုက်တစ်ထပ်၊ သဲတိုက်တစ်ထပ် ဖြင့် အုတ်တိုက်ခုနှစ်ထပ်၊ သဲတိုက် ခုနှစ်ထပ်ကို ပြုလုပ်ထားရှိ ခဲ့ပြန်ပါသည်။ ပုထိုးတော် တည်ဆောက်ရေး အတွက် အသင့်လျော်ဆုံးနှင့် အန္တရယ်ကင်းရှင်း စေရေးအတွက် အဝန်း (၄၄) ပေရှိသော အလည်မဏ္ဍိုင်ကို စ၍ ထူထောင်စေခဲ့ ပါသည်။ ထိုမဏ္ဍိုင်ကို ချိန်မျဉ်းထား၍ စတင် တည်ဆောက်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပုထိုးတော်ကြီး ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် အရစ်လိုက် မြောင်းဖော်ပြီး ကြေးမိုးကြိုး၊ သံကွင်းကြီးများဖြင့် ရစ်ပတ်မြုပ်နှံခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမှ တဆင့် အတွင်းမှစ၍ အုတ်စီနည်း(သို့) ငြမ်းပျောက် စနစ်ဖြင့် အုတ်စတင် စီခဲ့ကြပါသည်။
ဘုရား တည်ဆောက်ရေး ကာလတွင်၊ ပုထိုးတော် ကြီး၌ အများပြည်သူ ဖူးမျှော်နိုင်စေရန် သံပိဿာချိန် (၁၁၃၆၈) ဖြင့် နန်းတော်ကျွန်းရွာတွင် ရှေးယခင်မင်း တစ်ပါးမျှ မသွန်းလုပ် မပူဇော်ခဲ့ဖူးသော သံဆင်းတုတော် တစ်ဆူအား သွန်းလုပ် စေခဲ့ပြန်ပါသည်။ ထိုဆင်းတုတော်သည် အခြားမဟုတ် ယနေ့ မန္တလေးတောင်ခြေရှိ စန္ဒာမုနိဘုရားကြီးပင် ဖြစ်ပါလေတော့သည်။ ပုထိုးတော်ကြီး နှင့်တပြိုင်နက် အပြီးသတ် ရေစက်ချ နိုင်ရေးအတွက် အခြားကြီး လေးကြီးအနက်မှ ခြင်္သေ့ကြီး ၊ ရေကန်ကြီး ၊ခေါင်းလောင်းကြီး တို့ကို လည်း တပြိုင်တည်း တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဘိုးတော်ဘုရားသည် မင်းကွန်းနှင့် နန်းတော်ကျွန်းရွာတို့တွင် ယာယီ နန်းဆောက်ကာ ကိုယ်တိုင်ကြပ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ မင်းကွန်း၏ တောင်ဘက် (၆) မိုင်အကွာ ကြက်ထောင့် အရပ်တွင်လည်း ပေ(၄၂၀) အကျယ်၊ အနက် (၃၁) ပေ၊ (၈) လက်မ နက်သော ရေကန်တော်ကြီးကို တူးဖေါ်စေခဲ့ ပြန်ပါသည်။
ဤမျှ ဝေးကွာသော နေရာတွင် တူးဖေါ်ရခြင်းမှာ အခြားမဟုတ် ၊ ကြက်ထောင့်သည် တနင်္လာ၊ ကန်သည် တနင်္လာ ဖြစ်ပါသည်။တည်ဆောက်သော ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ဤ စီမံကိန်းကာလအတွင်း ပြဿနာကြီးများ အမျိုးစုံ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါသည်။ ဘိုးတော်ဘုရား၏ ဆင်ဖြူတစ်ကောင် သေလေသဖြင့် ဆင်ဖြူမရှိလျှင် ရန်သူလာတိုက်ခိုက်နိုင်သည်ဟု ဘိုးတော်ဘုရားက ခံစားရပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆင်ဖြူသေသည်ဟု မည်သူမျှ မပြောရ ဆင်ဖြူပျောက် သည်ဟုသာ ပြောကြ ရပါသည်။ဆင်ဖြုတော် သေသည်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်လွန်းသဖြင့် ပုထိုးတော်ကြီး ၏ အနောက်မြောက်ထောင့် တွင်ဆင်သေကို မြှပ်နှံစေခဲ့ ပါလေသည်။
ပုဏ္ဏားများ အကြံပြုချက် အရ အသက်(၁၂၀)တိုင် ရှည်စေရေး အတွက် ထိုပုထိုး တော်ကြီး၌ ဆီမီး (၁၂၀) အခြားလှူဖွယ် (၁၂၀) တို့ကို လှူဒါန်းခဲ့ ပြန်ပါလေသည်။ သိပ်မကြာ လိုက်ပါချေ ။ ဘိုးတော်ဘုရား ယာယီနန်းစံနေစဉ် တွင် ရှင်လွန်းမယ်မိဖုရား နတ်ပြည်စံလေပြန်သဖြင့် ရှင်လွန်းမယ်ကို မခွဲနိုင်ကာ လချီ၍ထားပြီး အမရပူရတွင် သဂြိုလ်ရန် စီစဉ်ရပြန်ပါလေသည်။ လူသေကိုမြို့ထဲ ပြန်မသွင်းရန် မှူးမတ်များအကြံပြုရာမှ ဆင်ဖြူမြှပ်ရာအနီးတွင် မိဖုရားအား မြှပ်ပြန်ပါလေသည်။
ငွေကြေးမရသဖြင့် စီးပွားရေးလည်း ထိ့ခိုက် လာကြပါသည်။ မကျေနှပ်မှုများလည်းဖြစ်ပေါ်လာကြပါသည်။ နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပုထိုးတော် ကြီး ဖြစ်ခွင့်နှင့်လွှဲသွားလေရန် ဘိုးတော်ဘုရား ကြုံတွေ့ လာရပါလေတော့သည်။ “ကြက်ထောင့် ကြောင်ဝပ်၊ ဝါကျွတ်မှ ထ ၊ ကြီးလေးကြီး အပြီး မသတ်၊ မုဆိုး သုည ကပ်” ဟူသော တဘောင် တစ်ခု ပေါ်ထွက် လာပါ လေတော့သည်။
အဓိပ္ပါယ်မှာ ကြက်ထောင့် ကန်ကို ဝါကျွတ်မှ ထဆိုရာတွင် (ကြောင်ထသောလ- ပြာသိုလ) မှာမှ စတူး သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ကြီးလေးကြီးကို အပြီးမသတ်နှင့် အပြီးသတ်လျှင် မုဆိုးဖို ခေါ် ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ပျက်သုန်းမည် ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပါသည်။ အာဏာရှင် ပဒေသရဇ် မှန်လျှင် အတိတ်၊ တဘောင်၊ စနည်း၊ ဗေဒင် ယတြာ တို့ကို အစွမ်းကုန် ယုံကြည်ကာ မိမိ၏ ရာထူး အာဏာ လက်လွှတ် ရမည့် အရေးကို သေဘေး သဖွယ် အလွန်ကြောက်ရွံ့ထိပ်လန့် တတ်ကြပြီး မိမိ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိမိ့ ကာကွယ်ရန် မည်သည့်ကိစ္စမဆို လုပ်ရဲကြပါသည်။
ကန်ကြီး ၊ ခြင်္သေ့ကြီး ၊ ခေါင်းလောင်းကြီး၊ တို့ပြီးသွား ခဲ့ပါလေပြီ ၊ အကယ်၍ ပုထိုးတော် ကြီးပြီးသွားခဲ့ပါလျှင် မင်းဆက်ပျက်သုန်းမည်ကို ကြောက်ရွံ့ သွားသော ဘိုးတော် ဘုရားသည် နှစ် (၂၀) ခန့် အချိန်ယူတည်လာခဲ့သော ပုထိုးတော် စီမံကိန်းကို (၁၈၁၂) ခုနှစ်တွင် ချက်ချင်းရပ်ရန် သံဓိဌာန် ချလိုက်ရပါလေတော့သည်။ ၎င်းနောက် ပုထိုးတော်ကြီး အစား ပုံတော်ဘုရားအား အပြီး သတ်တည်ခဲ့ပြီး ၊ စန္ဒာမုနိဆင်းတုတော်ကို အမရပူရရှိ မဟာစန္ဒာမုနိသို့ (အမရပူရအဝင် ဓာတ်ဆီဆိုင်အနီး)ပြန်သယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆင်းတုတော်ကို မင်းတုန်းမင်းမှ ယခုမန္တလေးမြို့သို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ သယ်ယူ ခဲ့ပြန်ပါသည်။အမှန်တကယ်တော့ ဘိုးတော်ဘုရားသည် ပုထိုးတော်ကြီးအား တည်ဆောက်ရာတွင် အမှားများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၆။ အလေးချိန် (weight) လျှော့ချကာ ငလျင်အတွက် ကြိုတင် တွက်ဆထားသော တည်ဆောက်ရေး (Structure) နှင့်နည်းပညာကောင်း မရှိခဲ့ခြင်း။
၇။ ပုဂံဘုရားများကဲ့သို့ ငလျင်အတွက် လိုက်လျော ညီထွေသော အုတ်စီပညာ နှင့်ထောင့်ချုပ် ကျောက် (Corner Stones) များ မထားရှိခဲ့ခြင်း၊ အစရှိသော အမှားများစွာတို့ဖြင့် “စကြာရေချ ငလျင်ဒဏ် ခံလိုက်ရအပြီး ဧရာမ အက်ကြောင်း ကြီးများ ပေါ်လာပါလေ တော့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ပင် ဖြစ်ပါလေတော့သည်။ထို့ကြောင့် ပုထိုးတော်ကြီးသည် ထိုခေတ် ထိုအခါက ဧကရဇ်၏ ဘုန်းတန်ခိုး၊ ဇာတိမာန်၊ အယူသည်းမှုတို့ ရောထွေးနေသော ရှေးကြေးမုံပြင် ပုံရိပ်တစ်ခု အဖြစ်နှင့် အပြီးမသတ်နိုင်သည့် အခြေနေဖြင့်သာ ထာဝရ ကျေနှပ် နေရပါတော့မည်။ အခုခရီးမသွား ဖြစ်သေးသော်လည်း ဘုရားသမိုင်းလေးတွေ အခြားဗဟုသုတလေးတွေတော့ လေ့လာထားလို့ ရတာပေါ့ဗျာ…အလုပ်အားတဲ့အခါကြတော့လဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတူ ဘုရားဖူးရင်း အပန်းဖြေ ခရီးတွေ သွားကြတာပေါ့နော်….
မငျးကှနျး ပုထိုးတျောကွီး တညျဆောကျခဲ့ကွစဉျက နှောငျးလူတို့ မသိ့ခဲ့ကွရသော ပွဿနာမြား
ပုထိုးတျောကွီး တညျထားရာတှငျ ဌာပနာတိုကျ (၂၁) တိုကျ ထညျ့သှငျး ထားရှိခဲ့ပါသညျ။ အလယျ ဌာပနာတိုကျမကွီးကို ကွေးသလှဲမညျး အခြိနျ (၄၁၄၈၃၄) ဖွငျ့ စတုရနျး (၁၀) တောငျ၊ အစောကျ (၇) တောငျ အထူ (၁) အရှယျဖွငျ့ ပွုလုပျထားခဲ့ပါသညျ။ အလယျ တိုကျ၏ အရှဘေ့ကျတှငျ အခငျြး (၃) တောငျ (၂)မိုကျ ၊ အစောကျ (၄) တောငျ အရှယျ ရှိသောကွေးစငျတိုကျ (၂) တိုကျကို “သ-သံ-ပူ-က” အက်ခရာ (၄) လုံးဖွငျ့ ရေးသားထားရှိခဲ့ပါသညျ။ ၎င်းငျးမှာ နတျသိကွားမငျး ကူညီသညျဟူသော ပါဠိစာပိုဒျ တဈခုကို အတိုခြုံ့ထားခွငျး ဖွဈပါသညျ။
” နတျအပေါငျးတို့ကို အစိုးရသော ငါသိကွားမငျးသညျ သတ်တဝါတို့ အစီးပှားကို ရှာတျောမူသောမွတျစှာဘုရားအား မငျးတရားကွီး ကွညျညိုနှဈသကျခွငျးငှာ ကွေးအုတျတို့ဖွငျ့ ပူဇျောခွငျးပွု၏” ဟူ၍ပငျ ဖွဈပါသညျ။
၎င်းငျးအလယျတိုကျမကို ခွံရံ၍ တဈတိုကျလြှငျ အခငျြး (၃) တောငျ (၂) မိုကျ ၊ အစောကျ(၇)တောငျ အထူ (၁)မိုကျ ၊ ကို ကွေးခြိနျပိဿာ (၁၂၂၆၀၃) ပိဿာ ၊ (၇၀) သား ရှိ ဌာပနာတိုကျတို့ ရှိကွပါသညျ။အရှဘေ့ကျတှငျ ဌာပနာ တိုကျ (၅) တိုကျ ၊ အနောကျ ဘကျတှငျ ဌာပနာတိုကျ (၅) တိုကျ ၊ တောငျဘကျတှငျ ဌာပနာတိုကျ(၅) တိုကျ၊👉မွောကျဘကျ တှငျ ဌာပနာတိုကျ (၅) တိုကျ စီကိုတညျဆောကျ ထားရှိခဲ့ပါသညျ။ ဌာပနာတိုကျ (၂၁) တိုကျ၏ ကွေးသလှဲ ပိဿာခြိနျ စုစုပေါငျးမှာ – (၂၈၆၆၉၀၈) ကြျော ဖွဈပါသညျ။
(၁၁၅၈) ခုနှဈ ၊ တပေါငျးပွညျ့နေ့၊ (၁၇၉၇)ခုနှဈ မတျလတှငျ ထိုဌာပနာတိုကျမြား အတှငျးသို့ နှဈကြိတျရှဈဆူ ဆငျးတုမြားကို ရှရေုပျတု (၂)ဆူ ၊ ငှရေုပျတု (၂)ဆူ ၊ ဖူးမြှျောနသေော ရှငှေရေုပျ (၄)ရုပျစီနှငျ့ ၊ ပှငျ့တျောမူပွီးသော သဈပငျ တို့ကို လညျး ရှငှေတေို့ဖွငျ့ ထုလုပျထားခဲ့ပါသညျ။ ထို့အပွငျ ဗုဒ်ဓဝငျခနျးမြားနှငျ့ အောငျခွငျး(၈)ပါး တို့ကိုလညျး ရှရေုပျ ငှရေုပျ မြားဖွငျ့ ထုလုပျကာ ဌာပနာထားရှိ ခဲ့ပွနျပါသညျ။ မွတျစှာဘုရား ဝါဆိုစဉျက တရားဟောကွားခဲ့သော ရုပျတု အပါအဝငျ ရှေ၊ ငှေ၊ မွ၊ပယငျး၊ မွငျးသီလာ၊ ပဉ်စလောဟာ၊ ဖနျ၊ အန်တကူကြောကျ၊ နီလာ၊ ကြောကျသလငျး၊ ကြောကျစိမျး၊ ကွေး၊ သလှဲဖွူ၊ ဒက်ခိဏသာခါ၊ ဆငျစှယျ၊ ကရမကျ၊ နံ့သာ၊ ကံ့ကူကြောကျဖွူ၊ ကြောကျညို၊ ကြောကျဝါဆငျးတုမြား အပါအဝငျ ဆငျးတုတျော စုစုပေါငျး (၄၄၁၉၅) ဆူ ၊ စတေီပေါငျး (၂၉၁၀)၊ ကြောငျး၊ ဇရပျ၊ သားတျော၊ သမီးတျော၊ မှူးကွီးမတျရာပုံမြားစှာတို့ကိုလညျး ထညျ့သှငျး ဌာပနာ ခဲ့ပွနျပါသညျ။
စာဆိုတျော ဒုတိယ နဝဒေးကွီးက သူ၏ ဝိလာသိနီ မျောကှနျးတှငျ- မငျးကှနျးသပွေ ၊ မညျတှငျ စလေကျြ၊ ဆယျ့နှဈခှပွေိုငျ၊ နောဒတျအိုငျသို့ ၊ ငါးဆိုငျတောငျစပျ၊ တညျရာရပျ တှငျ၊ သငျးကဈြပတ်တမွား၊ စှယျတျောပှားကို ၊ မှံထားစုပုံ၊ ထူပါရုံဟု၊ နတျဘုံ နိမျ့မွငျ့၊ တောငျကွီးသငျ့သို့ ၊ ဆငျ့ဆငျ့ပတျခွံ ၊ အာလိနျခံဖွငျ့၊ ဒိသံမ်ပတိ၊ မငျးကွီး လကျပွိုငျ၊ ရှအေုပျကိုငျ၍၊ ကိုယျတိုငျတျောနေ၊ သို့ ဖွဈထှကေို၊ အောကျမွအေ ထဲ၊ ငရဲနဂါး၊ မိုးဖြားဗွဟ်မာ ၊ သူရာဝှနျလှိုကျ၊ ကြိုကျကြိုကျမှနျနညျ၊ သိစိမျ့ ရညျ သညျ၊ ဆောကျတညျရှနှေလုံး စှဲတညျး။ ဟုစပျဆို ရေးသား ထားခဲ့ပွနျပါသညျ။
ထိုမျောကှနျး တဈနရောတှငျလညျး –
“သိကွားတံဆိပျ၊ ရှလေိပျခရာ၊ ဖွဈရုံကာမြှ၊ စုလ်လာသီတိ၊ သဟာဿိထကျ၊ မုနိစူဠာ၊ စတေီသာကို၊ ဣန်ဒာဗိုလျရူ၊ သဘငျပွုသို့၊ အကုဋနေတျ၊ လောကဓာတျ၌၊ ပတျ ပတျရဈခွံ၊ ပှဲကွီးခံ၍ ၊ သ သံ ပု က ၊ စာမအကြျော၊ လေးလုံးပျေါသား ၊ ထို ရောမခါနှဈ ၊ ဓိပ်ပါယျဖွဈမူ”ဟု စပျဆိုထားခဲ့ ပွနျပါသညျ။
ဌာပနာ စာရငျးမြားကို ကုနျးဘောငျ မဟာရာဇဝငျ တျောကွီးထဲတှငျ ပိုမိုသိရှိနိုငျရနျ ဖျောပွထားရှိပါသညျ။ ထိုအပွငျ ပုထိုးတျောကွီး၏ အဝလေးမကျြနှာတို့၌ အုတျတိုကျတဈထပျ၊ သဲတိုကျတဈထပျ ဖွငျ့ အုတျတိုကျခုနှဈထပျ၊ သဲတိုကျ ခုနှဈထပျကို ပွုလုပျထားရှိ ခဲ့ပွနျပါသညျ။ ပုထိုးတျော တညျဆောကျရေး အတှကျ အသငျ့လြျောဆုံးနှငျ့ အန်တရယျကငျးရှငျး စရေေးအတှကျ အဝနျး (၄၄) ပရှေိသော အလညျမဏ်ဏ္ဍိုငျကို စ၍ ထူထောငျစခေဲ့ ပါသညျ။ ထိုမဏ်ဏ္ဍိုငျကို ခြိနျမဉျြးထား၍ စတငျ တညျဆောကျခွငျးအား ဆောငျရှကျခဲ့ကွပါသညျ။ ပုထိုးတျောကွီး ခိုငျမာတောငျ့တငျးအောငျ အရဈလိုကျ မွောငျးဖျောပွီး ကွေးမိုးကွိုး၊ သံကှငျးကွီးမြားဖွငျ့ ရဈပတျမွုပျနှံခဲ့ကွပါသညျ။ ထိုမှ တဆငျ့ အတှငျးမှစ၍ အုတျစီနညျး(သို့) ငွမျးပြောကျ စနဈဖွငျ့ အုတျစတငျ စီခဲ့ကွပါသညျ။
ဘုရား တညျဆောကျရေး ကာလတှငျ၊ ပုထိုးတျော ကွီး၌ အမြားပွညျသူ ဖူးမြှျောနိုငျစရေနျ သံပိဿာခြိနျ (၁၁၃၆၈) ဖွငျ့ နနျးတျောကြှနျးရှာတှငျ ရှေးယခငျမငျး တဈပါးမြှ မသှနျးလုပျ မပူဇျောခဲ့ဖူးသော သံဆငျးတုတျော တဈဆူအား သှနျးလုပျ စခေဲ့ပွနျပါသညျ။ ထိုဆငျးတုတျောသညျ အခွားမဟုတျ ယနေ့ မန်တလေးတောငျခွရှေိ စန်ဒာမုနိဘုရားကွီးပငျ ဖွဈပါလတေော့သညျ။ ပုထိုးတျောကွီး နှငျ့တပွိုငျနကျ အပွီးသတျ ရစေကျခြ နိုငျရေးအတှကျ အခွားကွီး လေးကွီးအနကျမှ ခွငေ်ျသ့ကွီး ၊ ရကေနျကွီး ၊ခေါငျးလောငျးကွီး တို့ကို လညျး တပွိုငျတညျး တညျဆောကျခဲ့ကွပါသညျ။ ဘိုးတျောဘုရားသညျ မငျးကှနျးနှငျ့ နနျးတျောကြှနျးရှာတို့တှငျ ယာယီ နနျးဆောကျကာ ကိုယျတိုငျကွပျမှတျခဲ့ပါသညျ။ မငျးကှနျး၏ တောငျဘကျ (၆) မိုငျအကှာ ကွကျထောငျ့ အရပျတှငျလညျး ပေ(၄၂၀) အကယျြ၊ အနကျ (၃၁) ပေ၊ (၈) လကျမ နကျသော ရကေနျတျောကွီးကို တူးဖျေါစခေဲ့ ပွနျပါသညျ။
ဤမြှ ဝေးကှာသော နရောတှငျ တူးဖျေါရခွငျးမှာ အခွားမဟုတျ ၊ ကွကျထောငျ့သညျ တနင်ျလာ၊ ကနျသညျ တနင်ျလာ ဖွဈပါသညျ။တညျဆောကျသော ကာလကွာမွငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ ဤ စီမံကိနျးကာလအတှငျး ပွဿနာကွီးမြား အမြိုးစုံ ကွုံတှခေဲ့ရပွနျပါသညျ။ ဘိုးတျောဘုရား၏ ဆငျဖွူတဈကောငျ သလေသေဖွငျ့ ဆငျဖွူမရှိလြှငျ ရနျသူလာတိုကျခိုကျနိုငျသညျဟု ဘိုးတျောဘုရားက ခံစားရပွနျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဆငျဖွူသသေညျဟု မညျသူမြှ မပွောရ ဆငျဖွူပြောကျ သညျဟုသာ ပွောကွ ရပါသညျ။ဆငျဖွုတျော သသေညျကို စိတျမကောငျးဖွဈလှနျးသဖွငျ့ ပုထိုးတျောကွီး ၏ အနောကျမွောကျထောငျ့ တှငျဆငျသကေို မွှပျနှံစခေဲ့ ပါလသေညျ။
ပုဏ်ဏားမြား အကွံပွုခကျြ အရ အသကျ(၁၂၀)တိုငျ ရှညျစရေေး အတှကျ ထိုပုထိုး တျောကွီး၌ ဆီမီး (၁၂၀) အခွားလှူဖှယျ (၁၂၀) တို့ကို လှူဒါနျးခဲ့ ပွနျပါလသေညျ။ သိပျမကွာ လိုကျပါခြေ ။ ဘိုးတျောဘုရား ယာယီနနျးစံနစေဉျ တှငျ ရှငျလှနျးမယျမိဖုရား နတျပွညျစံလပွေနျသဖွငျ့ ရှငျလှနျးမယျကို မခှဲနိုငျကာ လခြီ၍ထားပွီး အမရပူရတှငျ သဂွိုလျရနျ စီစဉျရပွနျပါလသေညျ။ လူသကေိုမွို့ထဲ ပွနျမသှငျးရနျ မှူးမတျမြားအကွံပွုရာမှ ဆငျဖွူမွှပျရာအနီးတှငျ မိဖုရားအား မွှပျပွနျပါလသေညျ။
တညျဆောကျရေးသညျ အလှနျကွီးမားလှသလို အခြိနျလညျး ယူလှသဖွငျ့ တိုငျးပွညျအရပျရပျမှ လူထုမှာလုပျအားပေးကွရပါသညျ။ဘိလပျမွဖေျောစပျရနျ ဝါပငျမြား စိုကျပြိုးခွငျး ၊ အုံတုံပငျမြား မြားစှာအသုံးပွုရခွငျး၊ သဈပငျမြားစှာခုတျ၍ အုတျဖုတျပေးရခွငျးတို့ကို နှဈကာလ ကွာရှညျစှာ လုပျလာကွရသျော လှနျစှာပငျပနျး လာကွရပါသညျ။
ငှကွေေးမရသဖွငျ့ စီးပှားရေးလညျး ထိ့ခိုကျ လာကွပါသညျ။ မကနြှေပျမှုမြားလညျး ဖွဈပျေါလာကွပါသညျ။ နောကျဆုံး ကမျဘာ့အကွီးဆုံး ပုထိုးတျော ကွီး ဖွဈခှငျ့နှငျ့လှဲသှားလရေနျ ဘိုးတျောဘုရား ကွုံတှေ့ လာရပါလတေော့သညျ။ “ကွကျထောငျ့ ကွောငျဝပျ၊ ဝါကြှတျမှ ထ ၊ ကွီးလေးကွီး အပွီး မသတျ၊ မုဆိုး သုည ကပျ” ဟူသော တဘောငျ တဈခု ပျေါထှကျ လာပါ လတေော့သညျ။
အဓိပ်ပါယျမှာ ကွကျထောငျ့ ကနျကို ဝါကြှတျမှ ထဆိုရာတှငျ (ကွောငျထသောလ- ပွာသိုလ) မှာမှ စတူး သညျဟု ဆိုလိုပါသညျ။ ကွီးလေးကွီးကို အပွီးမသတျနှငျ့ အပွီးသတျလြှငျ မုဆိုးဖို ချေါ ကုနျးဘောငျမငျးဆကျ ပကျြသုနျးမညျ ဟု အဓိပ်ပါယျ ရပါသညျ။ အာဏာရှငျ ပဒသေရဇျ မှနျလြှငျ အတိတျ၊ တဘောငျ၊ စနညျး၊ ဗဒေငျ ယတွာ တို့ကို အစှမျးကုနျ ယုံကွညျကာ မိမိ၏ ရာထူး အာဏာ လကျလှတျ ရမညျ့ အရေးကို သဘေေး သဖှယျ အလှနျကွောကျရှံ့ထိပျလနျ့ တတျကွပွီး မိမိ့ကိုယျ့ကိုကိုယျ မိမိ့ ကာကှယျရနျ မညျသညျ့ကိစ်စမဆို လုပျရဲကွပါသညျ။
ကနျကွီး ၊ ခွငေ်ျသ့ကွီး ၊ ခေါငျးလောငျးကွီး၊ တို့ပွီးသှား ခဲ့ပါလပွေီ ၊ အကယျ၍ ပုထိုးတျော ကွီးပွီးသှားခဲ့ပါလြှငျ မငျးဆကျပကျြသုနျးမညျကို ကွောကျရှံ့ သှားသော ဘိုးတျော ဘုရားသညျ နှဈ (၂၀) ခနျ့ အခြိနျယူတညျလာခဲ့သော ပုထိုးတျော စီမံကိနျးကို (၁၈၁၂) ခုနှဈတှငျ ခကျြခငျြးရပျရနျ သံဓိဌာနျ ခလြိုကျရပါလတေော့သညျ။ ၎င်းငျးနောကျ ပုထိုးတျောကွီး အစား ပုံတျောဘုရားအား အပွီး သတျတညျခဲ့ပွီး ၊ စန်ဒာမုနိဆငျးတုတျောကို အမရပူရရှိ မဟာစန်ဒာမုနိသို့ (အမရပူရအဝငျ ဓာတျဆီဆိုငျအနီး)ပွနျသယျခဲ့ပါသညျ။ ထိုဆငျးတုတျောကို မငျးတုနျးမငျးမှ ယခုမန်တလေးမွို့သို့ ပွနျလညျပွောငျးရှေ့ သယျယူ ခဲ့ပွနျပါသညျ။အမှနျတကယျတော့ ဘိုးတျောဘုရားသညျ ပုထိုးတျောကွီးအား တညျဆောကျရာတှငျ အမှားမြားစှာ ပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။
၁။ ဘုရား၊ ကြောငျး၊ ကနျ လှူသညျဟူသော အစဉျအလာအရ ဘုရားမပွီးခငျ ကနျလှူခဲ့ပါသညျ။
၂။ ဆငျဖွူနှငျ့မိဖုရားတို့ကို ဘုရားတညျဆောကျရာ မွတှေငျ မွှပျနှံခဲ့ပါသညျ။
၃။ ဘုရားမပွီးခငျ မဟာရနျတံတိုငျးအား ခတျခဲ့ပါသညျ။
၄။ အဂင်္ငျြနီယာရှုထောငျ့အရ Foundation ကောငျးစှာ မပွုလုပျခဲ့ပါ။
၅။ ပုဂံ ဘုရားမြားကဲ့သို့ လှိုငျပတျလမျးမြားဖွငျ့ တညျဆောကျထားသော ‘အဟ’ (Space) မထားရှိဘဲ ထုပွညျ့ (Solid) ဘုရားအဖွဈသာ တညျဆောကျထားသော ဘုရား ဖွဈနပေါသညျ။
၆။ အလေးခြိနျ (weight) လြှော့ခကြာ ငလငျြအတှကျ ကွိုတငျ တှကျဆထားသော တညျဆောကျရေး (Structure) နှငျ့နညျးပညာကောငျး မရှိခဲ့ခွငျး။
၇။ ပုဂံဘုရားမြားကဲ့သို့ ငလငျြအတှကျ လိုကျလြော ညီထှသေော အုတျစီပညာ နှငျ့ထောငျ့ခြုပျ ကြောကျ (Corner Stones) မြား မထားရှိခဲ့ခွငျး၊ အစရှိသော အမှားမြားစှာတို့ဖွငျ့ “စကွာရခြေ ငလငျြဒဏျ ခံလိုကျရအပွီး ဧရာမ အကျကွောငျး ကွီးမြား ပျေါလာပါလေ တော့သညျမှာ ယနတေို့ငျပငျ ဖွဈပါလတေော့သညျ။ထို့ကွောငျ့ ပုထိုးတျောကွီးသညျ ထိုခတျေ ထိုအခါက ဧကရဇျ၏ ဘုနျးတနျခိုး၊ ဇာတိမာနျ၊ အယူသညျးမှုတို့ ရောထှေးနသေော ရှေးကွေးမုံပွငျ ပုံရိပျတဈခု အဖွဈနှငျ့ အပွီးမသတျနိုငျသညျ့ အခွနေဖွေငျ့သာ ထာဝရ ကနြှေပျ နရေပါတော့မညျ။ အခုခရီးမသှား ဖွဈသေးသျောလညျး ဘုရားသမိုငျးလေးတှေ အခွားဗဟုသုတလေးတှတေော့ လလေ့ာထားလို့ ရတာပေါ့ဗြာ…အလုပျအားတဲ့အခါကွတော့လဲ ကြှနျတျောတို့နဲ့ အတူတူ ဘုရားဖူးရငျး အပနျးဖွေ ခရီးတှေ သှားကွတာပေါ့နျော….
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြစဉ်က နှောင်းလူတို့ မသိ့ခဲ့ကြရသော ပြဿနာများ
​မိုင်းဆတ်မှာ ပြည်သူ့ စစ်တွေလေ့ကျင့် နေပီ
မိုင်းဆတ်မြို့ နယ်မှာ ပြည်​သူ့စစ်​အင်​အား ၃၀၀ လောက်ဟာမော်​​တော်​ဆိုင်ကယ်​​အပါအဝင် မော်​​တော်​ကားယာဉ်​တွေနဲ့ အသင့်စုဖွဲ့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်.
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​မိုင်းဆတ်မှာ ပြည်သူ့ စစ်တွေလေ့ကျင့် နေပီ
၂၅ ရက် ၂ လ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ဦးဝီရသူကိုအရေးယူရေးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပျက်သွားခဲ့တာ ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ ဒီပွဲကိုဖျက်ဖို့ သင်္ကန်းအရေခြုံတွေ မကွေး၊ မန္တလေးမြို.တွေကနေလာခဲ့ပါတယ်။ လာတဲ့အခါလည်း မဘသဆန္ဒပြပွဲတုိုင်းပါတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအများအပြားရယ်၊ ဆရာတော်မင်းသုည သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်လို့စကားတစ်ခွန်းစလိုက်တာနဲ့ ရိုက်ပွဲလုပ်ဖို့ခေါ်လာတဲ့ လူအင်အားကလည်း ၁၀၀ ကျော်လောက်ပါပါတယ်။ ၃၄ လမ်းအထက်လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ဒီလူတွေက နေရာယူထားတယ်၊ လမ်းဟုိုဖက် ထိပ်ဒီဖက်ထိပ်နေရာနှစ်နေရာလုံးမှာ ဆူပါကာစတန်ကား ၂ စီး ၃ စီးလောက်စီလူအပြည့်လည်းပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံသိုင်းအဖွဲ.ချုပ်ဟောင်း ဦးဆောင်တဲ့ သိုင်းသမားတွေလည်းပါတယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်ကိစ္စမှာဖမ်းခံရတဲ့ မျိုးညစ်တွေလည်းပါတယ်။
ဒါကိုမကြောက်ဘဲ ဆရာတော်မင်းသုညက သူတို့ဖက်က ဆရာတော် ၅ ပါး၊ သူ့ဖက်က ဆရာတော်ငါးပါးပွဲကိုတက် ကျန်တာ သတင်းထောက်ကဒ်ရှိတဲ့ သတင်းထောက်တွေဝင်ဆိုတာကိုလက်မခံဘူး။ ဒုစရိုက်သမားတွေပုံစံနဲ့ ဟုိုလူ့ကိုရိဒီလူ့ကိုရိနဲ့ လုပ်နေခဲ့ကြတယ်။ ဆရာတော်မင်းသုညရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ရိုက်ပွဲအသင့်ပြင်ထားတယ်။
ဒီလောက်အုတ်သြော်သောင်းနင်းဖြစ်နေတာ ယူနီဖောင်းဝတ် ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မှမရှိတာက ပိုအံအားသင့်စရာကောင်းတယ်။ ရဲစခန်းကလှမ်းခေါ်ရင်ကြားရလောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်မှမလာဘူး။ တမင်မလွှတ်ပဲထားတာလေ။ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့တော့ ပွဲပြီးရင်လုိုသလိုသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ သတင်းပေးတွေတော့ချထားတာပေါ့။
ဆရာတော်မင်းသုည(Min ThuNya)သာဆုံးဖြတ်ချက်လွဲရင် လူသေဆုံးမှုကျိန်းသေပေါက်ဖြစ်မယ့်ပွဲပါပဲ။
ပထမဆုံးပုံမှာပါတဲ့ မျိုးချစ်ရဟန်းတော်များအဖွဲ.ကဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးက သာဝန်ကိုဖြုတ်ချဖို့ သိန်း ၈၀၀၀ ရှိရင်ရပြီလို့ လူအုပ်ထဲမှာပြောကြားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
Credit… Maung TunWai, ZarniTike
Author admin 1Posted on February 28, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်